“ဘောနပ်စ်“ – Grab Love Story
သူ့နာမည်က ဇွဲ .. ။
နာမည်အရင်းက ဇွဲနေအောင် ဖြစ်သော်လည်း နေအောင်ဆိုသည်က သူ့အဖေနာမည် ဖြစ်သဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ ဇွဲဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ အများကလည်း သူပြောသလို သူ့ကို ဇွဲဟုသာ ခေါ်ခဲ့သဖြင့် အပေါင်းအသင်းများကြားတွင် သူ့နာမည်အရင်း ဇွဲနေအောင်ကို သိသည့်သူတောင် ရှားပါးလှသည်။
ဇွဲသည် ခေတ်လူငယ် တစ်ယောက် .. တိတိကျကျ ပြောရလျှင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းပြီးခါစ အသက်၂၄နှစ်အရွယ် တက်သစ်စ လူငယ်တစ်ယောက်။ ဘယ်နေရာတွင် အသုံးတည့်မည်မှန်း သေချာမသိသော ဘွဲ့တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့စွန်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသော လူငယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟုလည်း ထပ်မံ၍ ဖြည့်စွက်ဆိုလို့ရသည်။
ဇွဲသည် ရန်ကုန်ဇာတိတော့ မဟုတ်။ အထက်အညာရှိ မြို့တစ်မြို့ မှ နေ၍ ရန်ကုန်လာပြီး ကျောင်းတက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အညာသားဟု ဆိုလို့ရသော်လည်း ဇွဲက ပုံမှန်အညာသားတစ်ယောက်နှင့်တော့ လုံးလုံးမှ မတူ။ ဇွဲက အသား မမည်း။ ညိုတောင်မှ မညို။ ဖြူတာတော့ မဖြူဘဲ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်အတွက် ကြည့်ကောင်းယုံဟု ဆိုရမည့် အသားခပ်လတ်လတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
တကယ်လည်း ဇွဲရုပ်ရည်က မဆိုး။ ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ယောက်လို အရမ်းကြီးချောနေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာမော်ဒယ်လ်ဘွိုင်းတစ်ယောက်လောက်တော့ ရုပ်ရည်ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ဇွဲသည် ကျောင်းနေတုန်းက အတန်းသူ ကောင်မလေးများကြားတွင် တော်တော်ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကလေးမလေး တော်တော်များ၏ ပါးစပ်ဖျားတွင် ရေပန်းစားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ သော ကောင်မလှလှလေး တစ်ယောက်စ၊ နှစ်ယောက်စနှင့်မူ ရေပန်းစားသည်သာမက သူ့ရွှေပန်းပါ စားစေခဲ့သည့် အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့သည်။
သို့ပေမယ့် ဒါတွေက ပြန်ကြည့်လိုက်လျှင် တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်များသာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ နားထောင်ကောင်းသော်လည်း ကြီးတော့ ပုံပြင်စာအုပ်တောင် လှန်ကြည့်ရမှာ ပျင်းလှကြချည်သာ။ ဇွဲနှင့် ပတ်သက်ခဲ့သော ကောင်မလေးများလည်း ထိုနည်းအတူပင်။ ချစ်တုန်း ကြိုက်တုန်းကတော့ အခြေအနေတစ်မျိုး၊ ကြာလာတော့ အခြေအနေက တစ်မျိုး …။
ဒုတိယနှစ် မရောက်ခင်မှာ ပထမရည်းစားနှင့် ပြတ်၊ နောက်ဆုံးနှစ် မရောက်ခင်မှာ ဒုတိယ ရည်းစားနှင့် လမ်းခွဲပြီး၊ ကျောင်းပြီးလို့ သုံးလကြသည်တွင် နောက်ဆုံးရည်းစားနှင့် နှစ်ဦးသဘောတူ ဘိုင့်ဘိုင် လုပ်ခဲ့သည်။ ဇွဲ၏ အသည်းကွဲဇာတ်လမ်းများတွင် အဓိက တရားခံကို ပြောပြပါဆိုလျှင် တစ်ဦးထဲသာ ဖြစ်သည်။ တခြားမဟုတ်။ သဝွေထိုး င ဝဆွဲဆိုသည့် “ငွေ”သာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။
ဟုတ်သည်။ ဇွဲ၏ မိဘတွေသည် သာမန်တောင်သူ လက်လုပ်လက်စား သမားတွေ ဖြစ်သည်။
ဘာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှ မရှိ။ ဒီကြားထဲ မောင်နှမ သုံးယောက်ထဲတွင် သူက အကြီးဆုံး။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဇွဲ ရန်ကုန်ရောက်လာသည်ဆိုတာကလဲ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ တစ်ခုထဲ မဟုတ်။ အဆင်ပြေလျှင် အလုပ်တစ်ခု ရအောင် ရှာပြီး သူ့နောက်တွင် အတွဲလိုက် ကျန်နေသေးသော ညီနှင့် ညီမလေးကို ပြန်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်သည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် ဇွဲသည် ကျောင်းတက်နေတုန်းကတည်းက ရရာအလုပ်ကို ရှာလုပ်ခဲ့သည်။ အလုပ်မရွေးဘဲ လုပ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် လစာကောင်းကောင်းနှင့် အဆင်ပြေသည့် အလုပ်တစ်ခုတော့ လိုချင်ခဲ့သည်။ ခက်နေသည်က ဒါမျိုးအလုပ်ရဖို့ ဆိုတာကလဲ ဘာမှန်းညာမှန်းတာ မသိတာ။ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့တစ်ခုကို အလုပ်ရှင်တိုင်းက လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနှင့် တောင်းဆိုနေကြမြဲ ဖြစ်သည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရသောအခါမှ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ရခဲ့သည်။
ဒါကလည်း ပြောရလျှင် သူတော်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်။ လက်ရှိ သူနှင့်အတူနေသည့် ဘော်ဒါအရင်းအချာ ဖြစ်သူ ကောင်းမြတ်၏ အဆက်အသွယ်ကြောင့်ဟု ပြောရမည်။ ကောင်းမြတ်ဟု ဆိုတော့မှ မနက်ဘက် ရုံးမသွားခင် အိပ်ရာထဲ နှပ်နေတတ်သည့်သူ ..
အိပ်ခန်း၏ ဟိုဘက်ခြမ်းကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ကောင်းမြတ်၏ အိပ်ရာပေါ်တွင် စောင်တစ်ထည်သာ ဗလုံးဗထွေးနှင့် တွေ့နေရပြီး လူကိုတော့ မတွေ့။ ဒီကောင် စောစောနိုးပြီး အပြင်ထွက်သွားတာလား .. ဒါမှမဟုတ် ညကတည်းက ပြန်မအိပ်တာလား .. မသေချာလှချေ။
ကောင်းမြတ်နှင့် ဇွဲသိသည်မှာ ကျောင်းကတည်းက ဖြစ်သည်။ ဇွဲ၏ ဒုတိယ ရည်းစားဖြစ်သူ နီနီခိုင်မာက ဓါတ်ပုံအလှ ရိုက်ချင်သည်ဆိုပြီး ပူဆာခဲ့ရာမှ ထိုအချိန်က အပျော်တမ်း ဓါတ်ပုံဆရာ စလုပ်နေသူ ကောင်းမြတ်နှင့် သိကျွမ်းခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူ့လိုမျိုး အညာသား ဖြစ်သူ ကောင်းမြတ်နှင့် ဇွဲ အဖွဲ့ကျခဲ့သည်။ အဆောင်တောင်မှ ကောင်းမြတ် ရှိရာ အဆောင်သို့ ပြောင်းနေခဲ့ပြီး ကျောင်းပြီးသည့်အချိန်တွင် ကောင်းမြတ်က ဖိတ်ခေါ်သည်နှင့် သူ့စတူဒီယိုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ငှားထားခဲ့သော လမ်း၅ဝဘက်က တိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် သူနှင့်အတူ လိုက်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုပ်ရည်အားဖြင့် ဘာမှန်း မသိ .. ဂင်တိုတို .. လက်မောင်းနှစ်ဖက်တွင် တက်တူးအပြည့်နှင့် ဖြစ်သော ကောင်းမြတ်သည် လူကသာ ဘာမှ မဟုတ်ပေမယ့် .. တော်ကီကတော့ မဆိုး။ နောက်ပြီး ဇွဲကသာ အနုပညာမျက်စိ မရှိတာ .. သူကတော့ အနုပညာရော အကြမ်းပညာရော တော်တော်မျက်စိရှိသည်ဟု ဆိုရမည်။ သက်မဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမြတ်က ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ဇွဲလိုမျိုး ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် အလုပ်မရပေမယ့် တခါတခါ တွက်ကြည့်ရင် သူ့အကျိုးအမြတ်က ဇွဲထက်တောင် သာသေးသည်ဟု ဆိုရမည်။
ထိုကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ်ဆိုရာတွင် ပိုက်ဆံတစ်ခုထဲသာ ဆိုလိုသည် မဟုတ်။ အလှဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်သော မော်ဒယ်လ်ကောင်မလေးများနှင့် နှစ်ပါးသွားရခြင်းလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အဲ .. ဓါတ်ပုံလာရိုက်သည့် မိန်းကလေးတိုင်းနှင့်တော့ ဒါမျိုး ဖြစ်တာ မဟုတ်။ ဒီနေရာတွင် ရိုးရိုးအလှ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့် ဆက်ဆီဟု ခေါ်ရမည့် ဘော်ဒီအသားပေး ရိုက်ကူးခြင်း မတူလှသည်ကိုတော့ သိနားလည်ဖို့ လိုအပ်သည်။သာမန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ ဟိုဖော် ဒီဖော် ဒီဇိုင်းနှင့် လာရိုက်သော မိန်းကလေးများတွင်မူ ဆယ်ယောက်တွင် ငါးယောက်လောက်က ဇာတ်လမ်းစချင် စလို့ရသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်လည်း ဇွဲအနေနှင့် လောလောဆယ်တွင် ရည်းစားမရှိတာကို ဂရုမထားတာ ဖြစ်သည်။ စိတ်ပါလာလျှင် ကောင်းမြတ်နှင့် အဆင်ပြေ၊ သူနှင့်လည်း အထာကျသလိုလို ဖြစ်နေသော စော်တစ်ဗွေနှင့် ကောက်အိပ်လိုက်ယုံသာ။ တစ်ခါတစ်လေမျိုးဆို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတောင် စော်ကို ဆွဲခဲ့သေးသည်။ စော်တိုင်းတော့ ဒါမျိုး ဗျင်းလို့ရတာ မဟုတ်။ အခြေအနေကလဲ ရှိသေးသလို၊ အချိန်အခါကလဲ ရှိသေးသည်။ အားလုံးပေါင်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်တော့ ဒါမျိုးအဖြစ်လေးတွေ ဖန်တီးလို့ရသည်။
(၀ါး .. အလုပ်သွားရမှာ ပျင်းလိုက်တာကွာ) ..
သောကြာနေ့ ရောက်နေပြီမို့ ရုံးသွားချင်စိတ် မရှိသေးဘဲ အိပ်ရာက မထနိုင် ဖြစ်နေလေသည်။ ရာသီဥတုကလည်း ဒီဇင်ဘာ ကုန်ခါနီးမို့ ခပ်အေးအေးလေး ဖြစ်နေရာ အိပ်ရာထဲတွင် ဆက်နှပ်ချင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုအကြောင်း၊ ဒီအကြောင်း လျှောက်တွေးနေရင်းနဲ့ သူ့ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ပုံ အကြောင်း ရောက်သွားရာမှ ကောင်းမြတ်နှင့် စကားပြောချင်လာသဖြင့် လှမ်းကြည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
(ခွေးကောင် .. စောစောစီးစီး ဘယ်ရောက်သွားတာရတာလဲ .. ဒါမှ မဟုတ် ညတုန်းက စော်ကိုပဲ ပြန်လိုက်ပို့တာများလား)
ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် ခုတလော နွဲ့ဒါလီဆိုသော မော်ဒယ်လ်ပေါက်စလေးတစ်ယောက်နှင့် ညက်နေသည်။ အဲဒီ နွဲ့ဒါလီဆိုသည်ကလဲ မော်ဒယ်လ်ကြီး စစ်စစ်ရယ်လို့ မဟုတ်။ ဖေ့ဘုတ်တွင် ဆယ်ဖီရိုက်ကာတင်ရင်း နဲနဲလူသိများလာရာမှ မော်ဒယ်လ်လုပ်ရင်း ကောင်းမလားလို့ တွေးပြီး ဒီဘက်လိုင်းကို ပြောင်းလာသူ။ ကောင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကင်မရာမင်းပေါက်စအဖြစ် အသက်မွေးနေသူဆိုတော့ ချိတ်အချင်းချင်း ချိတ်မိကြခြင်း ဖြစ်သည်။
နွဲ့ဒါလီသည် ရုပ်ကလေးကတော့ မဆိုး။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်အနေနှင့် ပြောရရင်တော့ သိပ်အထွားစား မဟုတ်။ သို့သော် ဒါတွေက နွဲ့ဒါလီကို ဇွဲအနေနှင့် အပြင်မှာ မြင်ဖူးလို့ သိခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမြတ်ရိုက်ပေးသော ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာတော့ မရှိတာကို ရှိအောင် ထုတ်ပြပြီး ရိုက်ထားသဖြင့် ဓါတ်ပုံတစ်ခုထဲသာ မြင်ဖူးမည်ဆိုလျှင် နွဲ့ဒါလီသည် လုံးကြီးပေါက်လှဟု ထင်စရာ အကြောင်းရှိသည်။ ဒါကလဲ သိပ်တော့ ခက်ခဲလှသည့် ပညာမဟုတ်။
အကယ်၍ စာဖတ်သူသာ ယနေ့ခေတ် ဟာသစာရေးဆရာ အကြည်တော်၏ ကျွန်မမှ အင်္ဂလိပ်မှ မဟုတ်တာ မောင် ဆိုသော စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးသည်ဆိုသော် ကောင်းမြတ်တို့လိုမျိုး ဓါတ်ပုံဆရာတွေ ဘယ်လိုဓါတ်ပုံရိုက်သည်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပေလိမ့်မည်။ ဝမ်းကွာတားအဆင်တွင် နှစ်ကုန်းတစ်ကော့ (ဒါမှမဟုတ်) နှစ်ကော့တစ်ကုန်း စတိုင်လ်တွေ ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ မြင်လိုက်တာနှင့် ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ဖြစ်စေသော ဓါတ်ပုံတွေ ထွက်လာလေ့ ရှိသည်သာ။
ဓါတ်ပုံမြင်ယုံနှင့်တင် ထိုသို့ ဖြစ်သည်ဆိုတော့ အပြင်မှာ တွေ့နေရသော ကောင်းမြတ်တို့လို လူမျိုးကား ပြောစရာ မရှိတော့။ မစွမ်းရင်းကလဲရှိဆိုတော့ ကန်ဇွန်းခင်းကလဲ ညိပြီး .. ညိသည့် ကန်ဇွန်းခင်းတွင် ဒိုက်ဗင်ထိုး ဝင်လိုက်ယုံလေးပင်။ ဒါကြောင့်လဲ မနေ့ညက ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် နွဲ့ဒါလီ၏ အမေပေးတဲ့ ကန်ဇွန်းခင်းကွက်လေးတွင် ဒိုက်ထိုးနေခဲ့သည်သာ။
မနေ့ညက ဇွဲအိမ်ပြန်တာ နောက်ကျသည်။ ဘော့စ်ဖြစ်သူ ဦးမိုးလုံးဟိန်းကို ပါတီတစ်ခုသို့ လိုက်ပို့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်း အမြဲတမ်း သုံးနေကျ ဒါရိုက်ဘာက နေမကောင်းလို့ ဆိုပြီး ရှောင်တစ်ခွင် ခွင့်ယူသွားသဖြင့် သူဌေးလူယုံလိုလို၊ အပါးတော်မြဲလိုလို ဖြစ်နေသော ဇွဲက ဒါရိုက်ဘာလုပ်ကာ လိုက်ပို့ခဲ့ရသည်။ အထက်တန်းစားများသာ ဖိတ်ကြားဧည့်ခံသော ပွဲမို့ ဇွဲတစ်ယောက် နေရာ သိပ်မရ။ ပါတီကျင်းပရာ မြက်ခင်းပြင်၏ အစွန်တွင် ရှိသော ရေကူးကန်ဘက်တွင်သာ တစ်ယောက်ထဲ ငူငူငေါင်ငေါင်ထိုင်ကာ ယစ်ရွှေရည်လေး တစ်ခွက်ခြင်း သုံးဆောင်ရင်း အချိန်ဖြုန်းခဲ့ရသည်။ မျက်စိကတော့ ရွှေပွဲလာ ပရိတ်သတ်ထဲက ကောင်မလေးတွေ၊ ကောင်မကြီးတွေကို အမြည်းသဘောနှင့် သုံးဆောင်နေခဲ့သည်။ သို့သော် လှုပ်ရှားလို့ ရလောက်သည့် အကွက်တော့ မတွေ့ခဲ့ ..။
အားလုံးကိစ္စပြီးလို့ သူတို့တိုက်ခန်း ပြန်ရောက်တော့ သန်းခေါင်ချိန်တောင် ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ အိမ်သော့နှင့် တံခါးဖွင့်ပြီး ဝင်လိုက်တော့ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် မီးထွန်းထားတာ မတွေ့။ ကောင်းမြတ်က သူ့တိုက်ခန်းကို အခန်းနှစ်ခန်း ကန့်ထားသည်။ တစ်ခန်းက ဇွဲတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိပ်ခန်းဖြစ်ပြီး၊ ကပ်လျက် နောက်ဖေးဘက်တွင် စတူဒီယိုသဘောမျိုး နောက်ထပ်တစ်ခန်း ထပ်ခွဲထားသည်။
ခပ်ထွေထွေနှင့် ပြန်လာသူ ဇွဲ .. တချိုးထဲ ဝင်ခွေတော့မည်ဟု တွေးပြီး အိပ်ခန်းဘက် လျှောက်လာစဉ်တွင် စတူဒီယိုခန်းဘက်မှ စကားသံတစ်ချို့ ကို ကြားလိုက်ရသည်။
“ကိုကောင်းရယ် .. ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ မရွံဘူးလား ..”
“မရွံပါဘူး .. ဒါလီဟာလေးက နီနီသန့်သန့်လေးလေ ..”
ချက်ဆို နားခွက်မီးတောက်သည်မို့ ဘာသံတွေလဲဆိုတာ ဇွဲ ချက်ချင်း ရိပ်မိသည်။ ဒါ .. ဟိုကောင် .. နွဲ့ဒါလီနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အသံတွေပဲ။ ဒီကောင်မလေးနဲ့ တွဲတာမှ တစ်ပတ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေး။ တော်တော် လက်သွက်တဲ့ကောင်။ အခုတော့ စတူဒီယိုထဲမှာ ခေါ်ဖြုတ်နေပြီနဲ့ တူတယ်။ ဘာတွေလျှောက်လုပ်နေလို့ ရွံတာတွေ၊ မရွံတာတွေ ဖြစ်နေရတာလဲ ဆိုတာ သိချင်လာတာနဲ့ အိပ်ခန်းထဲ မဝင်ဖြစ်ဘဲ စတူဒီယိုအခန်းဘက် လျှောက်လာမိသည်။
ပုံမှန်ဆို ဇွဲ .. ဒါမျိုးကိစ္စတွေကို ချောင်းဖို့ စိတ်မဝင်စားပါ။ ကောင်းမြတ်နှင့် စော်တစ်ဗွေ ဖြစ်သည့် ကိစ္စက အထူးတလေ ချောင်းနေစရာ မလိုအပ်ပေ။ သကောင့်သားက တခါတခါ သူတို့နှစ်ယောက်ခန်းတွင် သူရှိနေတာ မရှိနေတာတောင် ထည့်စဉ်းစားနေတာ မဟုတ်။ သူနှင့် အထာညက်နေသော စော်ကို ခေါ်ပြီး သူ့ဘက်ခြမ်းက အိပ်ရာပေါ်တွင် ဖြုတ်ချင်ဖြုတ်နေတာ ဖြစ်သည်။ တမင်တကာ ချောင်းစရာ မလိုဘဲ လှမ်းကြည့်လိုက်တာနှင့် မြင်နေရမြဲ။
တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ ဇွဲနှင့် ကောင်းမြတ်က သိပ်ပြီးတော့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အထာတွေ၊ အကန့်တွေ မရှိ။ ကောင်းမြတ်တစ်ကောင် ဇွဲရှိနေခိုက် အခန်းထဲ စော်ခေါ်သွင်းပြီး ဖိနေလို့လဲ (ငါ့ ကြောလှချည်လား)လို့ ဇွဲဘက်က မတွေး။ ထို့အတူ ကောင်းမြတ်နှင့် ညိနေသော စော်ကို ဇွဲက စိတ်ပါလို့ တက်ဖိလျှင်လဲ ဟိုကောင်က (ဒီငနာ ဖြတ်ခုတ်သွားတယ်)လို့ မတွေး။ ဆိုခဲ့သလို တခါတလေ နှစ်ယောက်ပေါင်းတောင် စော်ကို တက်ဆွဲချင်
ဆွဲကြသေးတာမို့ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်က Win Win situation – က များလေသည်။ (ဟိုက် .. မသာကောင် .. ဟုတ်လှချည်လား)
စတူဒီယိုခန်း၏ တံခါးက တမင်တကာပဲ ဖွင့်ထားတာလား၊ ပိတ်ဖို့ပဲ မေ့နေတာလား မသိ။ တံခါးရွက်က တစ်ဝက်သာသာလောက် ပွင့်နေသဖြင့် အခန်းထဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နေရသည်။ ထိုသို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပိုမြင်ရန် ထပ်ပံ့ပိုးနေသည်က ဓါတ်ပုံရိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆလိုက်မီးကြီး နှစ်လုံးကို ကောင်းမြတ်က ဖွင့်ထားလို့ ဖြစ်သည်။ ဆလိုက်မီးထိုးထားသည့် ဇာတ်မင်းသားနှင့် မင်းသမီးကတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရာတွင် သုံးတာလား၊ မသုံးတာလား မသိသည့် မို့ရာတစ်ခုပေါ်တွင် ဝတ်လစ်စလစ် ဝတ်စုံနှင့် လုံးထွေးနေသည်။
(ဟ .. ဒီဟာမလေးက မဆိုးဘူးပဲ .. လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေး)
အခန်းတံခါးဘက်သို့ ကျောပေးပြီး လေးဘက်ထောက်ကာ ကုန်းပေးထားသော နွဲ့ဒါလီထံသို့ ဇွဲအကြည့်က အရင်ရောက်သည်။ မီးအလင်းအရောင်ကြောင့် အရှင်းသား မြင်နေရသော ပကတိတကိုယ်လုံးကို မျက်စိက စကန်ဖတ်သလို အသေးစိတ်ကြည့်မိသည်။ ကုန်းပေးထားသည့် ပိုစရှင်ကြောင့် လက်တစ်ဝါးအုပ်လောက် ရှိမည့် နို့လေးတွေက လုံးလုံးကျစ်ကျစ်နှင့် အောက်သို့ စူထွက်နေသည်။ အသက်ငယ်ငယ် အပျိုအရွယ်လေးမို့ တင်းတင်းရင်းရင်း ဖြစ်နေရာ အချို့သော အိမ်ထောင်သည် မိန်းမကြီးတွေလို စင်ထိုးထားသော ဗူးသီးတွေအလား တွဲကျနေတာမျိုး ဖြစ်မနေ။ နွဲ့ဒါလီ၏ ခါးလေးကလဲ သေးသေးသွယ်သွယ်လေး ဖြစ်ပြီး ကောင်းမြတ် မျက်နှာအပ်ထားသော တင်ပါးလေးတွေကမူ လုံးလုံးကော့ကော့လေး။
“မလုပ်နဲ့ဆို .. ကိုကောင်းရယ် .. ခက်တော့တာပဲ .. ရွံလဲ မရွံဘူး”
ညုတုတု ခရာသံလေးနှင့် လှမ်းပြောပြီး ဖင်လေးကို ဘယ်ညာယမ်းလိုက်မှ ဟိုကောင် ကောင်းမြတ် ဘာလုပ်နေသည်ဆိုတာ ဇွဲ သဘောပေါက်သွားသည်။ ဟ .. ဒီကောင် နောက်ပေါက်ဖွင့်ဖို့များ ကြံနေတာလား မသိ။ ဇွဲနေရာက လှမ်းကြည့်လျှင် ကောင်းမြတ်ခေါင်းနှင့် ကွယ်နေသဖြင့် ခုနက ဘာကိုလျက်နေသည်ဆိုတာ မမြင်ရတာ ဖြစ်သည်။ ဇွဲကြည့်နေစဉ်မှာပင် ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် မျက်နှာကို ဖင်ကြားက ခွာလိုက်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုရောအခါ နွဲ့ဒါလီ၏ အဖုတ်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။
(ဟ .. လူသာငါတာ အဖုတ်က မငယ်ပါလား)
အရည်တွေတလက်လက်နှင့် စိုနေသော အဖုတ်ကြီးက တကယ်ကို မသေး။ ကာမဆိပ်တက်နေသည့် အချိန်မို့လား မသိ။ ဖောင်းကားကာ ပြူးထွက်နေသည်။ ရီဝေဝေနှင့် မှန်လာခဲ့သည့် ဇွဲတစ်ယောက် စိတ်တွေတောင် ဖျဉ်းခနဲ ဖြစ်သွားရသည်။ ကိုယ်အပူရှိန်က တမဟုတ်ခြင်း တက်လာပြီး ပေါင်ကြားက ဒုတ်က အလိုလို မာတောင်လာသည်။
“ကိုကောင်း .. အတတ်မဆန်းနဲ့ကွာ .. နော် နော် .. ရိုးရိုးပဲ လုပ်ပါ ..”
နွဲ့ဒါလီ၏ တင်ပါးနှစ်ဖက်နောက် နေရာယူပြီး ကောင်းမြတ်က သူ့ဒုတ်နှင့် လှမ်းထောက်လိုက်သည်ကို
လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ ငနဲသားက ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကို လက်ဖြင့် ကျကျနဖြဲထားရာ စအိုဝ နီနီလေးက တကယ်ကို စူစူပွပွလေး ဖြစ်နေသည်။ ဇွဲကိုယ်တိုင် ကောင်းမြတ်လို စော်တွေကို ဖင်ချလေ့ ရှိသူဖြစ်ရာ ဒီမြင်ကွင်းတွင် စိတ်တွေ ဆူဝေတက်လာသည်။ ဝတ်ထားသည့် စတိုင်လ်ဘောင်းဘီသားကို ထောက်၍ ကန်တက်လာသည့် သူ့ကောင်ကို လက်ဖြင့် လှမ်းအုပ်ကိုင်မိသည်။
“ဟင့်အင်း .. ဟင့်အင်းကွာ .. မလုပ်နဲ့ “
“ဒါလီကလဲ .. ခနလေးပါ .. နဲနဲလေး စမ်းထည့်ကြည့်မယ် .. မခံနိုင်မှ ပြန်ထုတ်လိုက်မယ် ..” “ဟင့်အင်းကွာ .. ဒါလီ ဖုတ်ဖုတ်ကိုပဲ လုပ်ပေးဦး .. နော် ကိုကောင်း .. နောက်မှ ..”
လီးထိပ်ဖူးနှင့် စအိုဝလေးကို လှမ်းထောက်ခံရသော ကောင်မလေးခမျာ လန့်ဖြန့်သွားဟန် တူသည်။ ခေါင်းကလေး နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး ကောင်းမြတ်ကို အသားနာခံရှာသည်။ ကောင်းမြတ်က စကားနားမထောင်ဘဲ ထပ်ဖိထည့်နေသည်တွင် လေးဘက်ထောက်ထားသည့် လက်တစ်ဖက်ကို ဖြုတ်၍ လီးကို ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကြားမှ လှမ်းဆွဲလိုက်သည်။
“ကိုကောင်း .. ဒီဟာပဲ လုပ်ကွာ .. အားးးးး !!!”
စအိုဝစူစူလေးကို ရန်ရှာသလို လုပ်နေသော ကောင်းမြတ်လီးကို လှမ်းဆွဲပြီး စောက်ဖုတ်ဝတွင် ပြောင်းတေ့ပေးလိုက်သည်တွင် ကောင်းမြတ်က တစ်ချက်ထဲနှင့် ကျင်းဝင်အောင် သွင်းပစ်လိုက်သည်။ နွဲ့ဒါလီ ခါးကလေးကုန်းကာတက်ပြီး၊ ခေါင်းမော့ထွက်သွားသည်။ ပါးစပ်က ကျယ်ကျယ်လောင်ကို အော်ညည်းသည်။ သို့သော် နာလို့ ညည်းသံ မဟုတ်တာတော့ ဇွဲရော၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေသူ ကောင်းမြတ်ပါ ရိပ်မိပါသည်။
နွဲ့ဒါလီ အဖုတ်အနေအထားနှင့်က ကောင်းမြတ် လီးကို ကောင်းကောင်းခံနိုင်မှာ သေချာပါသည်။ ကောင်းမြတ်လီးက ပြောရမည်ဆိုလျှင် သိပ်အကြီးစားကြီးမှ မဟုတ်တာ။ သာမန်အရွယ်အစားလောက်ပဲ ရှိသည်။ အဲဒါကြောင့် ကောင်းမြတ်နှင့် ဖြစ်ပြီးသော စော်တစ်ချို့ဇွဲနှင့်ဆက်ဖြစ်လျှင် သူ့ဟာကြီးကို ပိုကြိုက်သွားကြတာ များသည်။ ကောင်းမြတ်ကတောင် တခါက နောက်တောက်တောက်နှင့် သူပြောဖူးသည်။ (ဟေ့ကောင် .. ဇွဲ .. မင်းချပြီးတဲ့ စော်ဆိုရင် .. ငါကတော့ ဖင်ပဲ ချချင်တော့တယ် .. အဖုတ်ကလုပ်လို့ မကောင်းတော့ဘူး) ဆိုပဲ ..။
“အီး .. ကောင်းတယ် .. ကိုကောင်း .. ဆောင့် ဆောင့် .. အင့် .. အင့် ..”
နွဲ့ဒါလီ ကော့လန်ပျံကားပြီး အော်ညည်းနေတဲ့အသံနောက်မှ ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ အားကြိုးမာန်တက် ဆောင့်နေတဲ့ အသံတွေက ကပ်လျက်လိုက်ပါနေသည်။ ဒါမျိုး အလိုးအဆောင့်တွင်မူ ကောင်းမြတ်က ဆရာကျသည်။ သက်လုံကောင်းသည်။ မနားတမ်းပင် အချက် လေးငါးဆယ်လောက် အသာလေး ဆွဲနိုင်သည်။ အခုလဲကြည့်။ လီးတစ်ချောင်းလုံး သွင်းထည့်လိုက်၊ ဒစ်ပိုင်းလောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်နှင့် အသားကုန်ကို ကျုံးနေသည်။ သေချာသာ ကြည့်မည်ဆိုလျှင် အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ထူထူကြီးနှစ်ဖက် သည် လီးတန်နှင့်အတူ လိပ်လိပ်၍ ဝင်သွားလိုက်၊ ပြန်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်ကို မြင်ရမည်သာ။ အရည်ကြည်မြုပ် ဖြူဖြူတွေကတော့ ပြောမနေနှင့်တော့။ အောက်ကခံထားသော မို့ရာပေါ်သို့ တပေါက်ပေါက်နှင့်ပင် ကျနေသည်။
ဇွဲကတော့ ဘာအကာအကွယ်မှ မပါဘဲ နိခ်ချည်းသပ်သပ် ကစ်နေသည့် ကောင်းမြတ်အစား အသည်းယားမိသည်။ ခံစားမှု ဖီလင်က ဘာမှ မပါလျှင် ပိုကောင်းသည်ဆိုတာ သိပေမယ့် နွဲ့ဒါလီလိုမျိုး စော်နှင်တော့ အတင့်မရဲသင့်ဟု ထင်သည်။ သို့သော်လည်း ဒါက ဖြတ်ခနဲ ပေါ်လာသောအတွေး။ ထိုအတွေးကို ကောင်းမြတ်နေရာတွင် ဝင်အစားထိုးပြီး နွဲ့ဒေါ်လီကို ဆော်ချင်သည့် စိတ်က လွှမ်းမိုးသွားသည်။ လက်ကအလိုလို ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖွင့်မိပြီး၊ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဘေးသို့ တွန်းဖယ်ပြီး လီးကို ထုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်တော့ အလိုလို ပွတ်မိသွားသည်။
“အင့် …. ကို .. ကောင်းလာပြီး .. ဒါလီ ပြီးတော့မယ် .. ဆောင့်ပေး .. ဆောင့်ပေး”
“အီး .. ကိုလဲ ပြီးတော့မယ် .. လာ .. လာပြီ”
ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် တရကြမ်းဆောင့်နေမှုကြောင့် နွဲ့ဒါလီက အရင်ပြီးသွားပုံရသည်။ တအားအားနှင့် ကုန်းအော်ပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားတာ တွေ့ရသည်။ အဲဒီနောက် ကောင်းမြတ်က နှစ်ချက်သုံးချက် ထပ်ဆောင့်ပြီး သူ့ဒုတ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ အမြုပ်ရည်တွေ ရွှဲနေသော အဖုတ်ဝက ဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းများကြောင့် အနည်းငယ်ပြဲလန်ပြီး ကျန်ခဲ့တာ တွေ့ရသည်။ ဇွဲကြည့်နေစဉ်မှာပင် ကောင်းမြတ်က သူ့ဒုတ်ကို ဖင်သားမြောင်းကြားပေါ် ထပ်တင်ပြီး လက်နှင့် ဂွင်းအဆက်မပြတ် တိုက်သည်။
“အာ့ .. ပြီး .. ပြီးပြီ !!”
ပထမဆုံး ပန်းထွက်လာသည့် သုတ်ရည်တန်းက နွဲ့ဒါလီ၏ ခါးစပ်တွင် ထိုးထားသော အတောင်ပံပုံ တက်တူးကိုတောင် ကျော်၍ ကျောပြင် ဝင်းဝင်းလေးပေါ်ကျသည်။ နောက်ထပ်ဆက်ထွက်လာသည်ကတော့ အရင်ဆုံးဟာလောက် အရှိန်မပြင်းတော့ဘဲ တက်တူးပုံ ပေါ်ကျသည်။ နောက်ဆုံးလက်ကျန်များကတော့ ဖင်သားလုံးလုံးဖွေးဖွေးများပေါ်တွင် ..
“ရှီး .. ကောင်းလိုက်တာ .. ဒါလီရယ် ..”
“ဒါလီလဲ ကောင်းတယ် .. ကိုကောင်း .. ကိုက သိပ်တော်တာပဲ .. ပြွတ်”
နွဲ့ဒါလီက ခပ်ညုညုလေး ချွဲကာပြောရင်း သူ့အပေါ်ကုန်းကျလာသည့် ကောင်းမြတ်၏ နှုတ်ခမ်းကို ဆီး၍ နမ်းသည်။ တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ပြွတ်ပြီးသည်တွင် ကောင်းမြတ်က မို့ရာဘေးသို့ လှဲချလိုက်သည်။ ထိုရောအခါ သူ့အကြည့်က အိပ်ခန်းတံခါးဝသို့ ရောက်လာရာ တံခါးဝနားတွင် ကိုယ်တစ်ခြမ်းနီးပါးပေါ်အောင် ရပ်နေမိသူ ဇွဲနှင့် တည့်တည့်တိုးတော့သည်။
(ဟိုက်!! .. သေပြီ .. ဆြာ)
လီးထုတ်၊ ဂွင်းတိုက်နေသည့် အဖြစ်ကို ကောင်းမြတ် မြင်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် သောက်ရှက်တော့ ကွဲပြီဟုတွေးမိပြီး ဇွဲတစ်ယောက် မျက်နှာတွေ ထူပူသွားသည်။ ကမန်းကတမ်း လီးကို ဘောင်းဘီထဲ ပြန်ထည့်ပြီး ကိုယ့်အိပ်ခန်းဘက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်လာခဲ့သည်။ မျက်စိထဲတွင်တော့ သူ့အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး
ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာနှင့် မခိုးမခန့် လှမ်းကြည့်နေသော ကောင်းမြတ်ပုံစံကို မြင်ယောင်နေသည် …။ လဒကောင် .. မသာဂျီး .. >:( >:(
“၀ါး … အူးးးး”
လက်နှစ်ဖက်ကို စောင်အောက်က ထုတ်ပြီး ခေါင်းပေါ်မြှောက်တင် ကိုယ်ကိုတွန့်၍ ဇွဲ ပျင်းကျောဆွဲလိုက်သည်။ အိပ်ရာခေါင်းရင်းဘက်ရှိ နံရံတွင် ချိတ်ထားသော တိုင်ကပ်နာရီကို လှမ်းကြည့်တော့ ရနာရီကျော်နေပြီ။ မထလို့ မဖြစ်တော့။ ဘော့စ်ဖြစ်နေလို့ ရုံးမသွားတာက ပြသနာမရှိ။ ဇွဲအနေနဲ့ကတာ့ မနေ့ညက ဘယ်အချိန်ပြန်ရောက်ရောက် ရုံးသွားမှကို ဖြစ်မည်။ မဟုတ်လျှင် HR က အပေါက်ဆိုးဆိုး ဘွားတော်က သူဌေးလူယုံတွေ၊ ဘာတွေ ဂရုစိုက်နေတာမဟုတ်။ ရက်ပျက်ကြေးဆိုပြီး ဖျက်လိုက်ရင် ဘောနပ်စ်တောင် မရသေး။ ကိုယ့်လခထဲက အရင် ကွိသွားဦးမည်။ မဖြစ်သေး .. မဖြစ်သေး ..။
စောင်ကိုဖယ်ပြီး အိပ်နေရာမှ ထထိုင်မှ သူမနိုးခင်ကတည်းက နိုးနေသော ဖွားဖက်တော်ကို သတိပြုမိသည်။ (နေပါဦး .. ညီလေးရာ .. မင်းအတွက် ဖြစ်လာမှာပေါ့) လို့ စိတ်ထဲက ပြောရင်း ရေချိုးခန်းဝင်ဖို့ သဘက်ဆွဲ ထွက်လာခဲ့သည်။ ကောင်းမြတ်၏ စတူဒီယိုခန်းနားရောက်လို့ အနည်းငယ် ဟတတဖြစ်နေသော တံခါးပေါက်ကိုအတွေ့၊ အထဲသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင် မျက်လုံးပြူးစရာ မြင်ကွင်းကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဆလိုက်မီးတွေ မပိတ်ဘဲ ထွန်းထားဆဲဖြစ်သော အခန်းထဲတွင် ကောင်းမြတ်က ရှိမနေပါ။ ညတုန်းက တွေ့ခဲ့ရသူ နွဲ့ဒါလီကတော့ ရှိနေသေးသည်။ သို့သော် ပုံမှန် အနေအထားနှင့် ရှိနေတာ မဟုတ်။ သစ်သားကုလားထိုင် တစ်လုံးတွင် တုပ်နှောင်ချည်ထားလျက်နှင့် ရှိနေတာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် နွဲ့ဒါလီ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပုံမှန်အဝတ်အစားများ ရှိမနေဘဲ .. နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်ကားများတွင် မြင်ရလေ့ရှိသော လည်သာအနက်ရောင် ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံကို Lingerie သဖွယ် ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ခြေတန်နှစ်ဖက်အား
ကုလားထိုင်၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်နှင့် တွဲချည်ထားပြီး၊ လက်နှစ်ဖက်ကိုမူ ခေါင်းပေါ်က မြှောက်ကာ လက်နောက်ပြန်ချည်ထားသည်။ နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်ထဲတွင်လည်း ဘောဂက်လို့ ခေါ်သည့် ကြိုးနှင့်ဆက်ထားသော ဘောလုံးအနက်လေးကို ထည့်ပိတ်ထားသည်။
“အူး .. အီး … အယ် … အာ … အုံး … အီ … အီ … အေး … အာ”
ကောင်းမြတ် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးမှု တော်တော်များများကို မီးထိုးပြ၊ ဆက်တင်ပြင် ဘာညာ လိုက်လုပ်ဖူးလို့ ဇွဲတစ်ယောက် မော်ဒယ်လ်ဝတ်စုံတော်တော်များများ မြင်ဖူးပါသည်။ သို့သော် ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကျပ်သားရေအနက် ပုံစံ .. ခပ်ဟော့ဟော့ ဒီဇိုင်းမျိုးကိုတော့ မတွေ့ခဲ့ဖူးပါ။ ဒီဇိုင်းက မိုက်သည့်အပြင်၊ လက်နောက်ပြန်မြှောက်ပြီး ထိုင်နေရမှုကြောင့် ရင်ဆိုင်တွေက မို့ပြီးတော့ကို ကော့ထွက်နေသည်။ မြင်လိုက်တာနှင့် သွေးဆူဖွယ်ကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်နေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဇွဲ နေရာမှာ ဆက်ရပ်နေမိရာ အခန်းဝသို့ မျက်လုံးကစားနေသူ နွဲ့ဒါလီက မြင်သွားရှာသည်။ ဘာတွေမှန်း မသိအော်ပြီး သူ့ကို လှမ်းပြောနေသည်။
ဇွဲ အခန်းပတ်လည်ကို အရင်လှည့်ကြည့်သည်။ သေချာသည်။ ဟိုကောင် ကောင်းမြတ် ရှိမနေ။ ကြည့်ရတာ
စောစောစီးစီး နိုးနေပြီး ရှူတင်ဝင်ဖို့လုပ်ရင်း ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ ထွက်သွားတာ ဖြစ်ရမည်။ ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်နေမိသည့် ဇွဲ၏ အတွေးက ညတုန်းက လူမိခံလိုက်ရသည့် အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ရောက်သွားသည်။
“လဒကောင် .. တွေ့ကြသေးတာပေါ့”
စပ်ဖြီးဖြီး မျက်နှာအသွင် ပြောင်းသွားပြီးနောက် ဇွဲ အခန်းထဲသို့ ခပ်တည်တည် ဝင်လာသည်။ သူဝင်လာသည်ကို မြင်တော့ နွဲ့ဒါလီက အားတက်သွားဟန်နှင့် တဝူးဝူးတဝါးဝါး ထပ်ပြောသည်။ ဇွဲ ရှူးဆိုပြီး လက်ညိုးတစ်ချောင်းထောင် နှုတ်ခမ်းနားကပ်ကာ လုပ်ပြလိုက်သည်။ နွဲ့ဒါလီ အသံလေး တိတ်သွားပြီး သူမ ဘေးနားရောက်လာသည့် ဇွဲအား အားကိုးတကြီး မျက်နှာနှင့် မော့ကြည့်သည်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားဟန် ရှိသော ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာလေးက မီးအလင်းရောင်ကြောင့် ဝင်းဝင်းလေး ဖြစ်နေသည်။
“ဘာမှ မပြောနဲ့ နွဲ့ဒါလီ .. ကို မေးတာကို ဖြေ .. ဟုတ်ရင်ခေါင်းညိတ်ပြ .. မဟုတ်ရင် ခေါင်းခါပြ ..”
ဇွဲ ဒီစကားပြောပြီးနောက် နွဲ့ဒါလီ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်သည်။ သူထင်ထားသလို နွဲ့ဒါလီက ခေါင်းကို သာသာလေး ညိတ်ပြသည်။ ဒီလောက်ဆို မဆိုး။ ရှေ့ဆက်တက်ဖို့ ရနိုင်သည်ဆိုတာ ဇွဲ ရိပ်မိလိုက်သည်။ အပေါ်စီးမှ ငုံ့ကြည့်နေသဖြင့် ရင်စီးနေရာအထက်ပိုင်းတွင် ဝင်းစိုနေသော နို့လုံးဖွေးဖွေးတို့၏ ထိပ်ပိုင်းအား လှမ်းမြင်နေရသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် မျက်နှာက ပြုံးဖြီးဖြီး ဖြစ်သွားပြီး လက်က မို့မောက်နေသည့် ထိုအပိုင်းအား လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။
“အူး … အူး … အ “
ဇွဲလက်ထဲ အိအိစီးစီးလေး ဖြစ်သွားသလောက် နွဲ့ဒါလီ၏ ကိုယ်ကလေးက တီကို ဆားနှင့်တို့လိုက်သလို တွန့်သွား၏။
“မရုန်းနဲ့လေ … ဒါလီ .. ဒီဟာတွေကနေ လွှတ်ချင်တယ် ဟုတ် ..”
“အု .. အု”
ဇွဲစကားကြောင့် နွဲ့ဒါလီ ပြန်ငြိမ်သွားပြီး သူ့ကို မျက်လုံးလေးဝင့်ကာ ကြည့်နေသည်။ ဇွဲက မျက်စိတစ်ဖက် မှိတ်ပြလိုက်တော့၊ မျက်စောင်းလေး တစ်ခုပြန်ထိုးသည်။ ပြီးတော့ သူမပါးစပ်ကို မော့ပြရင်း ပါးစပ်ထဲဝင်နေသော ဘောလုံးကို အမူအရာနှင့် ထုတ်ခိုင်းသည်။ ဇွဲ ဒီတစ်ခုတော့ လိုက်လျောလိုက်သည်။ နွဲ့ဒါလီ ခေါင်းကို နောက်ဘက်မှ ထိန်းကိုင်ပြီး သားရေကြိုးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါ ပါးစပ်ထဲမှ ဘောလုံးက ကျွတ်ထွက်လာသည်။
“ကိုဇွဲ .. လုပ်ပါဦး .. ဒါလီကို ဒီဟာတွေ ဖြေပေဦး”
စကားပြောနိုင်သွားသည်နှင့် နွဲ့ဒါလီ သူ့အား အပြေးအလွှား ပြောရှာသည်။နွဲ့ဒါလီ ဓါတ်ပုံလာရိုက်သည့် တစ်ရက်က ဇွဲက ကောင်းမြတ်ကို ၀ိုင်းကူပေးထားသဖြင့် သူ့တို့သိနေကြတာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဇွဲက နွဲ့ဒါလီ စကားကို
ဂရုစိုက်မနေ။ သူ့မှာလဲ သူ့အကြံနှင့်သူ။ ညတုန်းက ခပ်လှောင်လှောင် မျက်နှာပေးနှင့် ကြည့်သွားသော ကောင်းမြတ်ကို ပညာပေးရမည်။
“ဖြေပေးမယ် .. ဒါလီ .. ဒါပေမယ့် ဒါလီကလဲ ကိုယ့်ကို ပြန်ဖြေပေးရမယ်”
“ဟင် .. ဘာဖြေရမလဲ လို့ ..” (နှုတ်ခမ်းစူကာ ညုတုတုအသံလေးနှင့် မေးသည်)
“ဒါကို ဖြေပေးရမှာ “
ဇွဲက ပါးစပ်နှင့်သာမက လက်ဖြင့်ပါ အဖြေပေးလိုက်သည်။ ဝတ်ထားသည့် ညဝတ်ပိတ်ဘောင်းဘီကို သားရေကြိုးနေရာမှ အောက်သို့ဆွဲချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အီးလိုပြောရင် မနက်ခင်းသစ်သားတန်းလို့ဆိုရမယ့် အချောင်းကြီးက မားမားမတ်မတ် ထောင်လျက် ထွက်လာသည်။ နွဲ့ဒါလီ မျက်ဝန်းလေးများ လက်သွားပြီး၊ ပါးစပ်လေးက ၀ိုင်းဝိုင်းလေး ဟသွားရှာသည်။ ထွက်လာသည့် အသံကတော့ အိုခနဲဆိုသော အာမေတိတ်သံ ..။
နွဲ့ဒါလီတစ်ယောက် စိတ်တွေ လှုပ်ရှားသွားရသည်။ ဇွဲဆိုသည့်တစ်ယောက်ကို ကောင်းမြတ်နှင့် ပတ်သက်ကတည်းက သိနေသည်။ အရပ်မြင့်မြင့် ဗလတောင့်တောင့်နှင့် ဇွဲက ကောင်းမြတ်ထက် စာရင် ပိုကြည့်ကောင်းသည်မို့ မြင်မြင်ခြင်း စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်သာ။ အခုတော့ ဇွဲတစ်ယောက် တောင့်ဖြောင့်သည်ဆိုတာ ရုပ်ကလေးပဲ မဟုတ်ဆိုတာ ၊ သူမ မျက်နှာနားတွင် ဝဲနေသည့် အချောင်းကြီးကြောင့် သိလိုက်ရသည်။ ရင်ထဲ ဖိန်းခနဲ ရှိန်းခနဲ ဖြစ်လာသည်။
“ဘယ်လိုလဲ စုပ်ပေးမယ် မှတ်လား .. မစုပ်ပေးဘူးဆို … ဒီအတိုင်း ထားခဲ့လိုက်မယ် .. ကောင်းမြတ်ပြန်လာတာကို စောင့်”
နွဲ့ဒါလီ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေသလို စိတ်လှုပ်ရှားနေမှန်း သိလို့ အကြပ်ကိုင်ပြီး ပြောလိုက်သည်။ လူကိုယ်လဲ အခန်းထဲမှ ပြန်ထွက်တော့မည်ဟန် ကိုယ်ယောင်ပြသည်။ ဇွဲ ထင်သည့်အတိုင်း။ နွဲ့ဒါလီထံမှ အလောတကြီးနှင့် တုံ့ပြန်သံကို ကြားရသည်။
“မသွားနဲ့ .. ကိုဇွဲ .. တကယ်ပဲ .. စိတ်ညစ်တယ်နော် .. လာ .. လာခဲ့ … လူကို အနိုင်ကို ကျင့်တယ် .. ဟွန်း”
မျက်စောင်းတစ်ချက် ထပ်ထိုးလိုက်သည့် နွဲ့ဒါလီ၏ နှုတ်ခမ်းနီတာရဲလေးထံသို့ ဇွဲက သူ့အချောင်းကြီးကို ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။ အဆင်ကော ပြေပါ့မလားဟု ရင်တထိတ်ထိတ် ဖြစ်နေသူ ဇွဲ .. နွဲ့ဒါလီ ပါးစပ်လေး ဟကာငုံလိုက်သည်ကို တွေ့လိုက်မှပဲ စိတ်တစ်ဝက် အေးသွားရသည်။ ဟုတ်သည်လေ။ မတော် ဖြတ်ကိုက်လျှင် ဇွဲတစ်ယောက် ကျော်မကောင်း၊ ကြားမကောင်းသော ဒဏ်ရာနှင့် ဒီဇင်ဘာလကြီး အနားယူနေရမည် မဟုတ်လား။
နှုတ်ခမ်းပါးပါးလေးနှစ်ဖက်ကို ဖြတ်ပြီး သူမပါးစပ်ထဲသို့ ဝင်လာသည့် ထိပ်ဖူးလုံးကြီးကို နွဲ့ဒါလီ ကောင်းကောင်း စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိပ်ဝလေးအား လျှာလေးနှင့်ထိပြီး ကလိပေးလိုက်သည်တွင် ကိုဇွဲတစ်ယောက် သဘောကျသွားပုံနှင့် မျက်လုံးတွေပါ မှိတ်သွားသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ကောင်းနေသလို နွဲ့ဒါလီအတွက်လဲ ဒီအသားချောင်းကြီးကို စုပ်ရတာ အားရစရာ ကောင်းနေသည်။ အတန်ကြီးက ထွားထွားကြီး၊ ထိပ်ဖူးကလဲ မနည်းမနော။ ရွှေငှက်ပျောသီးကြီး ပါးစပ်ထဲ ရောက်လာသလို တွေ့ကြုံနေရသည်။
“အီး … ကောင်း .. ကောင်းလိုက်တာ .. ဒါလီရယ် .. အဲ့လို မျိုးလေး .. အား ..”
လီးဒစ်အောက်က မေးသိုင်းကြိုးနေရာလေးအား လျှာဖျားလေးနှင့် ပွတ်တိုက်ခံရသည်တွင် ဇွဲတစ်ယောက် ခြေဖနောင့်တွေပင် ကြွတက်သွားရသည်။ နွဲ့ဒါလီက သူမခေါင်းကို ရှေ့နောက်လှုပ်ရှားရင်း လီးကို အဝင်အထွက်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ ကောင်းချက်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ .. နွဲ့ဒါလီ ကြည့်ရတာ ပလွေပညာကို တော်တော်အဆင့်မြင့်မြင့် တတ်မြောက်ထားပုံရသည်။ အသက်ကလေး ငယ်ပေမယ့် ပညာကမငယ်။ ပါးကလေးများ ပိန်လိုက်၊ ဖောင်းလိုက် ဖြစ်လာသည်အထိ ကြိုးစား စုပ်ပေးသလို၊ လျှာကလေးကို ကောင်းကောင်း အသုံးချပြီး လီးကို ကလိနေသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ကိုယ်ကို မနည်းပင် မတ်မတ်ရပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားထားရသည်။
“အီး .. ကောင်းတာ .. ဒါလီရယ် .. စုပ်စုပ် .. အား .. အား”
လက်တစ်ဖက်က နွဲ့ဒါလီ၏ ခေါင်းအား ထိန်းကိုင်ပြီး သူမပါးစပ်ကို အောက်သို့ပိုဖိချမိသလို၊ ကျန်တစ်ဖက်နှင့်လဲ နက်ပြောင်နေသော သားရေသားအောက်မှ မို့မောက်နေသည့် ရင်သားလုံးလုံးတစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲသည်။ နို့သီးရာလေး ထင်းနေသည့် နေရာကို လက်ဖြင့်အုပ်ပြီး လက်ညိုး လက်မသုံးကာ ဖိချေပေးလိုက်သည်။
“အူး … အိ … အိ”
အဓိက အချက်နေရာကို အဆွခံရတော့ နွဲ့ဒါလီလဲ သွေးသားတွေ ဆူပွက်လာရသည်။ အစတုန်းကတော့ ထိုင်ခုံမှာ တုပ်နှောင်ပြီး ချည်ထားခံခဲ့ရသော ဘဝက လွတ်ချင်လို့။ အခုတော့ သူမကိုယ်တိုင် လီးစုပ်ရတာကို အရသာတွေ့သထက်တွေ့နေသည်။ လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ဖက် မလှုပ်နိုင်သည်ကိုတောင် မေ့ပြီး၊ လှုပ်နိုင်သည့် ပါးစပ်ကို သုံးပြီး အားရပါးရ ထပ်စုပ်သည်။ ဇွဲဟာကြီးကလဲ တကယ်ကို အားရလောက်အောင် ကြီးသည်မို့ သူမ စိတ်တွေဆူဝေပွက်သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ဖောင်းတက်ပြီး အရည်ကြည်တွေ အလိုလို စို့လာရှာသည်။
“အူး .. မရတော့ဘူး .. ထွက် .. ထွက်ပြီ!!”
အိနွေးပူစက်သည့် နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်အတွင်းသားလေးများက ပေးသည့် အရသာကို မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး ဇွဲတစ်ယောက် ကျော့ကော့၊ ဖင်ကော့ တက်သွားသည်။ လီးကြီးက ဖောင်းကားတက်ပြီး ထိပ်ဝကနေမူ သုတ်ရည်ပူတွေ ပန်းထုတ်မိသည်။ နွဲ့ဒါလီကိုယ်တိုင်လဲ လည်ချောင်းထဲကို ထိုးကျလာသော သုတ်ရည်ပျစ်ပျစ်များကြောင့်၊ စိတ်ထဲတွင် ပေါက်ကွဲထွက်ပြီး အဖုတ်ကနေ အရည်ကြည်တွေ စိမ့်ကျသည်။ သူမကိုယ်သူမ သတိမထားမိခင်မှာပင် အသေးစား ကလိုင်းမက်စ်တစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရသည်။
“အား .. ကောင်းလိုက်တာကွာ .. ကျေးကျေးပဲ .. ဒါလီ ..”
သုတ်ရည်တွေ ပြောင်စင်အောင် ကုန်သွားတော့ သူ့လီးကို နွဲ့ဒါလီ ပါးစပ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပါးဖောင်းဖောင်းလေးအား လက်နှင့် လိမ်ဆွဲပြီး ပြောသည်။ နွဲ့ဒါလီက သူ့အား မျက်စောင်းတစ်ချက် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထိုးရင်း တုံ့ပြန်သည်။
“ဒါ .. ဒါဆို ဒီဟာတွေ ဖြေပေးဦး .. ကောင်းမြတ်က ဘာမှန်း မသိဘူး .. ဓါတ်ပုံဆန်းဆန်းရိုက်ရအောင် ပြောပြီး သူများကို ခုံမှာ ချည်သွားတယ် ..”
“ဖြေပေးရမှာပေါ့ .. နေဦး .. ကြိုးစက ဘယ်နားမှာပါလိမ့် ..”
လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ချည်ထားသော ကြိုးစအား ရှာဖွေရန် ဇွဲပြုသည်။ နွဲ့ဒါလီ မျက်လုံးလေးများ မျှော်လင့်ချက်ကြောင့် ဝင်းလက်သွားသည်။ သို့သော် ဇွဲက တစ်ခုခုကို အရေးတကြီး အမှတ်ရဟန်နှင့် စတူဒီယိုခန်းရှိ နံရံတွင် ချိတ်ထားသော တိုင်ကပ်နာရီကို လက်ညိုးထိုးပြသည်။
“အာ .. ဆောရီး … ဒါလီ .. ကိုယ် ရုံးသွားဖို့ အချိန်နောက်ကျနေပီ .. ပြေးရဦးမယ် … နောက် .. နောက်မှနော် ..” “ဟင် !! .. ဇွဲ .. ဇွဲ .. ခင်ဗျား .. ဒါဘာလုပ်တာလဲ ??? >:( >:(“
အခန်းဝသို့ လှည့်ထွက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သော ဇွဲကို နွဲ့ဒါလီက အသံစူးစူးနှင့်အော်ကာ လှမ်းမေးသည်။ သူမကိုယ်ကို လှုပ်ခါပြီးလဲ ရုန်းသည်။ ထိုင်ခုံနှင့် ကြမ်းပြင်ဆောင့်သံ တဒုန်းဒုန်း ထွက်လာသည်။ ဇွဲ နွဲ့ဒါလီအား လှည့်ကြည့်၍ ရှူးဆိုပြီး လုပ်ပြသည်။ သူမနားသို့ ပြန်ရောက်လာပြီး ခုနက ကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်ချထားသော ဘောဂက်ကို ပြန်ကောက်ယူသည်။
“တိတ်တိတ်လေး နေပြီး .. ကောင်းမြတ် ပြန်လာတာစောင့်နော် .. ဒါလီက လိမ္မာပါတယ် .. ရော့ .. ပါးစပ်လေး ဟလိုက်ဦး .. အာာာာာ …”
နွဲ့ဒါလီတစ်ယောက် ဒေါသထွက် ခံပြင်းနေသည့်ဟန်နှင့် သူ့အား မျက်လုံးပြူးကြည့်နေပေမယ့် ဇွဲတစ်ယောက် မမှုတော့ပါ။ စပ်ဖြီးဖြီး မျက်နှာပေးနှင့် ပြုံးပြလိုက်ပြီးနောက် ရေချိုးဖို့ရန် နောက်ဘေးဘက် ထွက်လာခဲ့သည်။ နွဲ့ဒါလီ၏ ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်သံက တံခါးပိတ်ထားခဲ့သော စတူဒီယိုခန်းထဲမှာ ကျန်နေခဲ့တော့သည်။
ဇွဲ ရုံးတက်ရသည့်နေရာက မြို့ လည်ခေါင်ရှိ အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးကြီး၏ ၁၅ထပ်မြောက် အလွှာတွင် ဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူ၏ အဓိက ရုံးခန်းအဖြစ် အဆိုပါအဆောက်အဦးကြီး၏ ၁၅ထပ်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်စီးထားသည်။ ဒီလောက်ဆိုလျှင် ဇွဲ၏ သူဌေး ဦးမိုးလုံးဟိန်းရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို စာဖတ်သူ အနည်းငယ် မှန်းဆမိမည် ထင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် မြန်မာပြည်၏ နာမည်ကျော် သူဌေးကြီးများထဲမှ တစ်ဦးအပါအဝင် ခရိုနီ အကြီးစား တစ်ယောက် ဖြစ်လေသည်။
နေ့စဉ် လာနေ့ကြအတိုင်း မြို့ထဲဘက်ရောက်မည့် ဘတ်စကား တစ်စီးကို စီး၍ ရုံးလာခဲ့သည်။ ပန်းဆိုးတန်းထိပ် ရောက်တော့ ကားက နွားလှည်းအသွင် ပြောင်းသွားပြီး ကတ္တရာလမ်းပေါ်တွင် နွံနစ်သလို တစ်ဘီးခြင်း လှိမ့်နေရှာသည်။ ဇွဲလည်း စိတ်မရှည်တော့သည့် အဆုံး ဘတ်စကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ လျှောက်လာခဲ့သည်။
ရုံးအဆောက်အဦးရှိရာ အောက်ထပ်ရှိ ရုပ်ရှင်ရုံနားရောက်တော့ မနက်ဘက် သူလုပ်နေကြ ထုံးစံအတိုင်း Bakery ဆိုင်မှာ ကော်ဖီနှင့် မုန့်ဝင်ဝယ်သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဝယ်နေကြ ဖြစ်လို့ အရောင်းကောင်တာမှ
ကောင်မလေးများနှင့်တောင် ဇွဲ တော်တော်သိနေပြီ ဖြစ်သည်။ (ကိုဇွဲ .. ထုံးစံပဲ မှတ်လား)ဆိုပြီး လှမ်းမေးသည့် ကောင်မလေးကို (ဟုတ်တယ် .. အသဲလေးရယ်) လို့ ခပ်နောက်နောက် ဖြေလိုက်သည်။ ကောင်မလေးက ဟွန်းဆိုပြီး မျက်စောင်းထိုးပေမယ့် မျက်ဝန်းများကမူ ပြုံးစစ ဖြစ်နေသည်။ အသဲလေးဟု ခေါ်လိုက်သော ထိုကောင်မလေး နာမည်က သဲသဲချိုဆိုတာ ဇွဲသိနေခဲ့သည် မဟုတ်လား ..။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နောက်ကျနေပြီဟု တွေးထားသော ဇွဲ .. ရုံးခန်းထဲ ရောက်လာချိန်တွင် သူ့သူဌေး ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ရောက်မလာသေးပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တော်သေးသည်။ သူဌေးထက် စောရောက်နေလို့။ မဟုတ်လျှင် ကားပိတ်လို့ ဘာညာဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးခြင်းကို လက်မခံသော ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ အဆူအဟောက်ကို ခံချင်ခံနေရမှာ ဖြစ်သည်။
ဘော့စ် ဆိုပြီး ခေါ်ရသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် အသက်အားဖြင့် လေးဆယ်ကျော် အရွယ်လောက်ရှိသည်။ ဇွဲနှင့်ဆိုလျှင် နှစ်၂ဝနီးပါးလောက် ကွာဟသည်။ သို့သော် ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူဌေးပီပီ သူ့ကိုယ်သူ အမြဲရှိုင်းနေသူမို့ နုပျိုနေသည့်ဟန် ပေါက်သည်။ ဆိုးဆေး သုံးထားမှုကြောင့် ဆံပင်ဖြူရယ်လို့ မရှိသော ခေါင်းက အမြဲနက်မှောင်ပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသည်။ ပင်ကိုယ်ရုပ်သန့်သော ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် အဆင့်မြင့်မြင့် ဝတ်စားဆင်ယူမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ တကယ်ကို လူကြီးလူကောင်း ဂျန်တမန်း စတိုင်ထွက်နေသည်။ ထို့ကြောင့်ပဲလား မသိ .. ဦးမိုးလုံးဟိန်းတွင် အခြား ယောက်ျားသားများ အားကျချင်စရာကောင်းသော ဇာတ်လမ်းတွေက များလှလေသည်။
ဇွဲတစ်ယောက် ဦးမိုးလုံးဟိန်းထံတွင် အလုပ်ဝင်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကျော် ကာလတွင် သူ့ဘော့စ် ပတ်သက်ခဲ့သော မိန်းမတွေက မနည်းလှပါ။ အကြိမ်တိုင်း အကြိမ်တိုင်းတွင် သိလာခဲ့ရသော မိန်းကလေးများသည် တရုတ်စကားပုံ တစ်ခုအတိုင်း တောင်တစ်လုံးထက် တစ်လုံးပိုမြင့်သလိုမျိုး တင်စားလို့ရနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ ရှေ့ကတစ်ယောက်ထက်၊ နောက်ပေါ်လာသည့် တစ်ယောက်က ပိုချော၊ ပိုလှနေလို့ဖြစ်သည်။ လက်ကီးဘတ်စတတ်ဆိုသော အသုံးအနှုန်းသည် ဦးမိုးလုံးဟိန်းကို ရွေး၍ ပြောထားဟန် ရှိသည်။
သို့သော် တကယ်တမ်း ပြောရမည်ဆို ဦးမိုးလုံးဟိန်းကို ဇွဲ လုံးလုံး နားမလည်နိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသော် သူဌေးကတော် ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းယမုံကို ဇွဲတစ်ယောက် ကောင်းကောင်း သိနေလို့ ဖြစ်သည်။ မိုးကုတ်သူ ကျောင်းတွင်းပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်သော သူဌေးကြီးတစ်ဦး၏ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းယမုံသည် ဇွဲအမြင်တွင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျက်သရေ အရှိဆုံး၊ ဆွဲဆောင်မှု အရှိ်ဆုံး၊ အချောမောဆုံးဟု ဆိုရမည့်သူ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်နန်းယမုံဟု ဒေါ်တပ်ခေါ်ရပေမယ့် အပြင်မှာ နန်းယမုံကို တွေ့လျှင် ဘယ်လိုမှ ဒေါ်တပ်ခေါ်ချင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ အေးမြသည့် ရာသီဥတုတွင် နေထိုင်ကျင်လည်လာသော တောင်ပေါ်သူလဲ ဖြစ်၊ ဘက်ဂရောင်းတောင့်သည့် သူဌေးမလေး တစ်ဦးလဲ ဖြစ်သော နန်းယမုံသည် အသက်အားဖြင့် သုံးဆယ်ကျော်လာသည့်တိုင် ကြည့်လိုက်ရင် နှစ်ဆယ်ကျော် အရွယ်လေးလောက် ထင်ရသည်။ အပြစ်အနာအဆာ ကင်းသော မျက်နှာဖူးဖူးလေးအား ပုခုံးကျော်ရုံ ရှည်သော ကော်ဖီရောင် ဆံနွယ်များနှင့် လှပစွာ ဝန်းရံထားသည်မှာ Photoshop effect သုံးကာ ပြင်ထားသည့်အလား ထင်ရသည်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ခြေမွေးမီးမလောင်၊ လက်မွေးမီးမလောင် နေလာခဲ့ရသူ ဖြစ်သည့်အပြင်၊ ဇွဲ သိထားသည့်အချက်အရ ယောဂလဲ အမြဲလေ့ကျင့်သည်ဆိုသော ဒေါ်နန်းယမုံသည် တကိုယ်လုံး
အချိုးအစားပြေပြစ်ကာ ကြည့်လို့ကောင်းလှသည်။ အခုခေတ် ချာတိတ်မလေးမျိုးလို ပိန်ပိန်လှီလှီ သေးသေးကွေးကွေးလဲ မဟုတ်။ ငါးပေခြောက်လက်မဆိုသော အရပ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီသော အချိုးစားကျနသည့် ကိုယ်လုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အလုံးစုံကို ချုံငုံ၍ ပြောလိုက်ရလျှင် နန်းယမုံသည် နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Charlize Theron နှင့် နင်လားငါလား ချောမောသူပင်။ ဆံပင်အရောင်လေးသာ ရွှေအိုရောင် ဆိုးလိုက်လျှင် မြန်မာပြည်ရဲ့Charlize Theron လို့ ဆိုလို့ရနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်လဲ ဇွဲ .. သူ့ဘော့စ်ဖြစ်သူကို နားမလည်နိုင်တာဖြစ်သည်။ သူသာ ဦးမိုးလုံးဟိန်းနေရာမှာ ဆိုလို့ကတော့ ဒေါ်နန်းယမုံနှင့် ဖက်အိပ်ပြီး တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးအောင် လိုးနေမိမှာ သေချာပါသည်။
(အင်း .. လူတွေ .. လူတွေ .. ကိုယ့်မှာ ရှိတာကျတော့ အဟုတ် မထင်ကြဘူး .. ခက်တော့တာပဲ)
သံဝေဂရသလို ညည်ညည်းညူညူ တွေးနေမိသော ဇွဲ၏ အတွေးက သူဌေးကတော် ဒေါ်နန်းယမုံထံမှ ဦးမိုးလုံးဟိန်းဆီသို့ ပြန်ရောက်သွားသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် တခါတခါ ဘော့စ်ကို မကြည်သော အချက်မှာ ဦးမိုးလုံးဟိန်းသည် ကလိမ်ကကျစ် ကျချင်သော ဗီဇလေး ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဒါမျိုးက စီးပွားရေးလုပ်သူများတွင် မကင်းသည်မို့ ဇွဲ နားလည်ပေးလို့ ရပါသည်။ သို့သော် တခါတခါ သူနှင့် လာပတ်သက်သလိုမျိုး ဖြစ်လာရသောအခါ ထိုအချက်က ဇွဲ မကျေနပ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ဆိုရလျှင် ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ စပွန်ဆာကောင်မလေးများအတွက် အသုံးကို ဇွဲက ကုမ္ပဏီရဲ့ စာရင်းတွင် မလှိမ့်တပတ်နှင့် ထည့်ပေးထားရသည်။ တကယ်တမ်း ထိုစာရင်းကို ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ဒေါ်နန်းယမုံနှင့် ရှင်းရတော့ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ဝင်ကူသည်မဟုတ်။ ဇွဲသာ ရင်ထဲ ဘုရားတရားတရင်း ဒေါ်နန်းယမုံ မျက်စိလည်အောင် ရှင်းပြရင်း ဖြေရှင်းရတာ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံကလဲ ပြောရလျှင် ခပ်တုံးတုံး ခပ်အအ သမားတော့ မဟုတ်။ အော်ဇီရှိ နာမည်ကြီး ကျောင်းတစ်ကျောင်းက ဘွဲ့တစ်ခု ရထားသူဖြစ်လို့ တစ်ချို့ကိစ္စများတွင် သူမက ဇွဲထက်တောင် ပိုအမြင်ကျယ်သေးသည်။ ဇွဲအတွက်တော့ တကယ်ကို ရှိရှိသမျှ တန်ခိုးရှင်များအား တရသည့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဇွဲ သူ့ဘော့စ်ကို မကြည်သည်က နောက်တိုးစပွန်ဆာ ကိစ္စတစ်ခုက သူနှင့် တိုက်ရိုက် ပတ်သက်လာလို့ ဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက လက်ရှိ ရှိနေသော စပွန်ဆာကောင်မလေး တစ်ယောက် အပြင်၊ သိပ်မကြာသေးခင်က Miss ဘွဲ့ရခဲ့သော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စပွန်ဆာ ထပ်ပေးသည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို ဇွဲ ဘာမှ ပြောမိမှာ မဟုတ်သော်လည်း .. ခက်သည်က အဲဒီတစ်ယောက် စပွန်ဆာကိစ္စကို သူက လိုက်ဖန်တီးပေးရတာ ဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး ဖြစ်ချင်တော့ ချောချောငယ်ဆိုသော အဲဒီအသစ်တစ်ယောက်သည် သူ့ရည်းစားဟောင်း နီနီခိုင်မာနှင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်။ ဇွဲတို့ ကျောင်းထဲက ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ပြောရလျှင် ဇွဲအတွက် မျက်နှာပူစရာလိုလို၊ မျက်နှာနာစရာလိုလို ခံစားခဲ့ရသည်။ ချောချောငယ် ကိစ္စအတွက် သူလိုက်လုပ်ပေးရတာ တကယ်ကို မကျေနပ် ..။ သို့သော် သူ့မှာ No Choice !!
ဝယ်လာသည့် ကော်ဖီလေး ကုန်ခါနီးသည့် အချိန်တွင် ဦးမိုးလုံးဟိန်း ရုံးခန်းထဲ ဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမြဲတမ်း ကျော့ကျော့မော့မော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့် တွေ့ရလေ့ရှိသော ဦးမိုးလုံးဟိန်း .. ဒီနေတော့ ဖိုသီဖတ်သီ ဖြစ်ကာ ကို့ရိုးကားရား ပုံစံပေါက်နေသည်။ ဇွဲသည်ပင် အံ့အားသင့်မိသည်မို့ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်နေရာမှ ထ၍
“ဂွတ်မောနင်း .. ဘော့စ်”
“ဇွဲ .. မင်းလာဦး .. ငါ .. မင်းနဲ့ ပြောစရာ ရှိတယ်”
လေသံတင်းတင်းနှင့် ပြောပြီး သူ့ရုံးခန်းဘက်လှည့်ထွက်သွားသော ဦးမိုးလုံးဟိန်းကြောင့် ဇွဲ စိတ်တွေ စနိုးစနောင့် ဖြစ်မိသည်။ မနေ့ည ပါတီမှာတုန်းက အကောင်းကြီး။ အခု မနက်ကျတော့ ပုံစံက ညတုန်းကနှင့် မတူ။ ဘာများ ဖြစ်လာတာပါလိမ့်။ ဇက်ကလေးပုပြီး ကိုယ်ကိုယို့ကာ ဘော့စ်နောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာခဲ့သည်။
အခန်းထဲရောက်လို့ ဦးမိုးလုံးဟ်ိန်းက လက်ဟန်နှင့် တံခါးပိတ်ခိုင်းလိုက်သည်တွင်၊ ဇွဲ ပိတ်လိုက်ပြီးနောက် အခန်းအလယ်ရှိ စားပွဲရှေ့က ခုံတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက တခြားဘက်ရှိ သူ့နေရာတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးဟန်နှင့် စပြောသည်။
“မင်း .. ခနနေရင် .. ချောချောဆီ သွားလိုက်”
“ငါပြောတာ သေချာနားထောင် … ချောချောဆီ သွား .. ပြီးရင် သူနဲ့မင်း သမီးရည်းစားတွေလို ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ ..” “ဟင် !!”
ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်ထဲကနေသာ မဟုတ်ဘဲ ပါးစပ်ကနေပါ (ဟင်)ဟု ထွက်သွားသည်။ စိတ်ထဲ မရှင်းတော့သည်မို့ ဦးမိုးလုံးဟိန်းပြောနေသည်ကို ဖြတ်၍ မေးမိသည်။
“သမီးရည်းစား ဟုတ်လား .. ဘော့စ် .. ကျနော် နားမလည်ဘူး??”
“ငါပြောတာ မပြီးသေးဘူး .. ဖြတ်မမေးနဲ့ .. ဒီမှာဟေ့ .. ငါနဲ့ ချောချောကို ငါ့မိန်းမက မိသွားလို့ဟေ .. အဲဒါ မင်းက ချောချောရည်းစားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ခိုင်းနေတာ ..”
“ကျနော်က .. ချောချောရည်းစား ..??”
“ဟုတ်တယ် .. မင်းက ချောချောရည်းစား .. ဒီမှာကွာ ငါပြောပြမယ် .. ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုသိသွားမှန်း မသိဘူး .. ငါ့မိန်းမက ငါနဲ့ချောချော တွဲနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရထားတယ် .. ဟိုလိုပုံတွေတော့ မဟုတ်ဘူး .. ရိုးရိုးပုံတွေပဲ .. ဒါပေမယ့် ဒါတွေပြပြီး ညတုန်းက ငါ့ကို ရစ်တာ အသည်းအသန်ပဲ .. အဲဒီတော့ မင်းက ချောချောနဲ့တွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထားလိုက် .. ငါ့မိန်းမ မေးလာရင် မင်းရည်းစားလို့ ဖြေလိုက် .. ငါနဲ့က မင်းဆီလာလည်ရင်း သိသွားတာလို့ ဖြေပေးလိုက် .. တခြားဘာမှ မဟုတ်ဘူး .. တစ်ခါနှစ်ခါ စကားပြောဖူးတယ်ပေါ့ .. ဒါဆို သူယုံသွားလိမ့်မယ် .. ဟုတ်ပြီလား ..”
ဒီတော့မှပဲ အကြောင်းရင်းကို လိပ်ပတ်လည်အောင် ဇွဲ နားလည်လိုက်သည်။ လက်စသတ်တော့ သူ့ကို ဓါးစာခံအဖြစ် သုံးနေတာကိုး။ ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုခိုင်းတာနှင့် မထူး …။
ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ လူလည်ကျမှုကို ဇွဲ သိပ်မကျေနပ်။ သို့သော် အတင်းအကြပ်ကြီးလဲ ငြင်းဆန်လို့က မဖြစ်။ ဒီလူက
မကျေနပ်လို့ အခုချက်ချင်း အလုပ်ထွက်ဆိုလျှင် သူ့ခမျာ တခြားလခကောင်းသော အလုပ်ရှာဖို့က လွယ်လှသည် မဟုတ်။ နောက်ပြီးတော့ အခုအချိန်ပိုင်းက တကယ့် အချိန်ကြီး။ နှစ်ကုန်ခါနီးပြီဆိုတော့ ဒီလကုန်မှာ ရမည့် ဘောနပ်စ်ကို မျှော်နေရသေးသည် မဟုတ်လား။ တော်ကြာ အလုပ်ပြုတ်သွားလို့ လခမရသည့်အပြင် မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေး ရနိုင်သော ဘောနပ်စ်နှင့် လွဲသွားလျှင် အခက် ..
“ဟုတ် .. ဟုတ်ကဲ့ .. ဘော့စ်” (နှုတ်က လက်ခံသည့် သဘောထွက်လိုက်ပေမယ့် ဇွဲ၏ မျက်နှာက ရှုံ့တွနေသည်) “အေး .. တကယ်လို့ အရမ်းကြီး အချေအတင် ဖြစ်လာရင်တော့ မင်းနဲ့ ချောချော ကို ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းပြီး တစ်နေရာမှာ တွေ့လိုက်မယ် .. ငါ့မိန်းမ အထင်လွဲမှာ စိုးလို့ ဖြေရှင်းပြတဲ့ သဘောပေါ့ .. အဲဒီလောက်ဆို ယမုံက ယုံမှာပါ .. မင်းကို သူသိနေတာပဲ”
“လွယ် .. လွယ်တော့ မလွယ်ဘူး ထင်တယ် .. ဘော့စ်” (မဝံ့မရဲသံလေးနှင့် ဇွဲလှမ်းပြောရှာသည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် ဒေါ်နန်းယမုံအား လိမ်ညာရမည် ဆိုတာကို သိပ်ပြီးတော့ မလုပ်ချင်)
“ဟွကောင် .. တော်တော် … ထပ်မပြောနဲ့ .. မင်းနဲ့ငါနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး .. ငါ့မိန်းမ မေးရင် မင်းနဲ့ ချောချောက ရည်းစားလို့ ဖြေ .. ဒါပဲ … သိပြီလား !!!”
ဒေါသထွက်ကာ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့် အော်လိုက်သည့် ဦးမိုးလုံးဟိန်းကြောင့် ဇွဲတစ်ယောက် ဇက်ကလေး ပုသွားရှာသည်။ မတတ်နိုင်။ သူ့ဆန်စားမှတော့ ရဲယုံပဲရှိတော့သည်။ နောင်ကိစ္စ နောက်ကျမှပဲ ရှင်းတာပေါ့။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ဇွဲပုံစံကို ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးပိတ်လက်နက်ကို ထုတ်သုံးပြန်သည်။
“ငါပြောသလိုသာလုပ် .. ဇွဲ .. အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် .. အဲ့လိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ မင်း ဒီမှာ ဆက်အလုပ်လုပ်မနေနဲ့တော့ ..”
“ဗျာ .. ကျနော်!!” (မျက်လုံးအပြူးသားနှင့် အထစ်ငေါ့ငေါ့ ဖြစ်ကာ ဇွဲ ပြန်ဖြေမိသည်)
“အေး .. အဲဒါ ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ .. မင်း လုပ်တတ်ပါတယ် ဇွဲရာ .. ဟိုစာရင်းတွေတောင် လုပ်ပေးခဲ့သေးတာပဲ .. စိတ်ပူမနေနဲ့ .. ဒီတစ်ခါထဲ .. ငါ မင်းကို ဘောနပ်စ် ကောင်းကောင်းပေးမှာပါ ..”
“ဟုတ် .. ကဲ့ .. ကျနော် အဆင်ပြေအောင် လုပ်လိုက်ပါ့မယ် .. ဘော့စ်”
ဒီစကားကြားတော့မှ ဦးမိုးလုံးဟိန်း မျက်နှာက ပြုံးရွှင်သွားသည်။ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက သူ့ဟန်းဖုန်းကို ထုတ်ပြီး နံပါတ်တစ်ခုကို ရှာဟန်ပြုသည်။
“ငါ အခု ချောချောဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် .. မင်း တစ်ခါထဲ သွားလိုက်”
“ဟုတ်ကဲ့ .. ဘော့စ်” (ဇွဲ ထိုင်ရာမှထပြီး ရုံးခန်းထဲက ထွက်လာမည့် အပြု ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူ့မျက်လုံးတည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်သည်)
“ငါ မှာလိုက်မယ်နော် ဇွဲ .. ချောချောနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် လိုတာထက် မပိုစေနဲ့ .. တစ်ခုခု သတင်းပြန်ကြားရင် မင်း ငါ့အကြောင်း သိတယ်နော် ..”
“အာ .. မဖြစ်စေရပါဘူး .. ဘော့စ် .. ကျနော် သိပါတယ်”
ဇွဲတစ်ယောက် ပါးစပ်ကနေ ဖြေရှင်းလိုက်ရင်း အခန်းထဲမှ ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ အခန်းထဲက မထွက်ခင်မှာပင် ဘော့စ်ဖြစ်သူ၏ ချွဲပစ်နေသော လေသံကို ကြားဖြစ်အောင် ကြားလိုက်ရသေးသည်။ (ခေး ..
နိုးပြီလား .. မောနင်း)ဆိုသည့် အသံ။ နားကလော်ဖွယ် ကောင်းလှသည့်မို့ သောက်မြင်ကပ်ကပ်နှင့် စိတ်ထဲကနေ ကျိန်ဆဲမိသည်။ သေနာဂျီး .. အဲဒီလောက် လီးသရမ်းနေတာ အေကိုက်ပါစေ .. တော် .. ဟွင်း .. ဟွင်း >:(
ရုံးခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီးနောက် အဆေက်အဦးအောက်ထပ်သို့ ဓါတ်လှေကားဖြင့် ဆင်းလာခဲ့သည်။ ရုံးရှေ့ရောက်တော့ ချောချောငယ်ဆီ ဘယ်လိုသွားရရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်သည်။ ချောချောငယ်က မြေနီကုန်းဘက်တွင် နေသည်မို့ ဇွဲတို့ ရုံးခန်းကနေ လိုင်းကားစီးသွားလို့ရသည်။ နောက်တော့မှ ဘော့စ်ခိုင်းလို့ သွားရတာပဲဟု အတွေးပေါက်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက လာနေသည့် တက်စီတစ်စီးကို လက်ပြလိုက်သည်။ ဟုတ်သည်လေ .. ဓါးခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုရမည့်သူ .. ဒီလောက်တော့ သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဇွဲတွေးလိုက်သည်။
(မြေနီကုန်းက ကွန်ဒိုကို ပို့ပေးပါ) ဟု ကားသမားကို ပြောပြီးနောက် ဇွဲ နောက်ခန်းကနေ အငြိမ့်သား ထိုင်လိုက်လာခဲ့သည်။ လမ်းဘေးဝဲယာကို ဟိုငေးဒီငေးကြည့်ရင်း လိုက်ပါလာသည့် ဇွဲ .. သူ့အတွေးတွေက ချောချောငယ်ဆီသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
ဇွဲ .. ချောချောငယ်ကို ကောင်းကောင်းသိသည်။ သူ့ရည်းစားဖြစ်သူ နီနီခိုင်မာနှင့် သူငယ်ချင်း ဖြစ်လို့သာမက၊ ချောချောငယ်သည် နီနီခိုင်မာလိုပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့၊ အိုက်တင်ထုတ်ဖို့ ၀ါသနာပါသူ ဖြစ်သည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ကောင်းမြတ်နှင့်တောင် ချောချောငယ် သိသေးသည်။ သို့သော် နီနီခိုင်မာနှင့် ဇွဲ ညက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ချောချောငယ်နှင့် သူ .. သိပ်ပတ်သက်ခြင်း မရှိခဲ့။ အဲဒါကြောင့် ချောချောငယ် ဘာလုပ်၊ ဘာကိုင်နေသည်ကို ဇွဲ သေချာ မသိခဲ့။ နီနီခိုင်မာနှင့် ပြတ်သွားသည့် အချိန်တွင် ချောချောငယ်နှင့် ကျောင်းထဲမှာ တစ်ခါနှစ်ခါ ဆုံသေးသည်။ သို့သော် တစ်ခွန်းစ၊ နှစ်ခွန်းစ နှုတ်ဆက်ယုံတင် မပိုခဲ့။ ကျောင်းပြီးလျှင် တွေ့စရာလည်း မရှိတော့ဟု ထင်ထားခဲ့သည်။
တကယ်တမ်း ပြန်တွေ့ရပြန်တော့ ချောချောငယ်၏ အနေအထားက ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားသည့် အခြေအနေ။ နာမည်ကြီး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် ချောချောငယ် Miss အဖြစ် အရွေးခံရသည်က ဇွဲအတွက် ထူးခြားသော အကြောင်းတရား မဟုတ်။ အရပ်ရှည်ရှည်တွင် ဖြောင့်စင်းသွယ်တန်းသော ခြေတံတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော ချောချောငယ်သည် ကြည့်လိုက်တာနှင့် မော်ဒယ်ရုပ် ထွက်နေသည့်သူ။ မော်ဒယ်တစ်ယောက် အသာလေး ဖြစ်နိုင်သော ချောမောသည့် ရုပ်ရှည်ကိုလည်း ချောချောငယ်ဆိုသော နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဒီတော့ ၂၀၁၅အတွက် ဘာMiss .. ညာMiss ဆိုတာ အံ့သြစရာ ကိစ္စမဟုတ်။ အံ့သြဖို့ ကောင်းသည်က သူ့ဘော့စ် ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ဒါလေးကို စပွန်ဆာ ပေးထားပြီး .. ချောချောငယ်ကလည်း စပွန်ဆာ ကျိတ်ပြီး လက်ခံထားသည့် အဖြစ်သာ။
သိခါစတုန်းကတော့ ဇွဲမှာ ဖင်ကြား အမြီးညှပ်နေသလိုကို ခံစားရသည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူနှင့် ချောချောငယ်ကို မသိဘူး ထင်ပြီး၊ ချောချောငယ် နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ခိုင်းသောအခါ ပိုလို့တောင် ဆိုးသေးသည်။ အခု ချောချောငယ် ရှိနေမည်ဆိုသော မြေနီကုန်းဘက်က ကွန်ဒိုခန်းကို ဇွဲပင် ရုံးအသုံးစရိတ်ထဲထည့်ကာ ဝယ်ပေးခဲ့ရသည်။ ဟွန်ဒါ FIT လေးတစ်စီးလည်း သပ်သပ် ဝယ်ပေးခဲ့ရသေးသည်။ ချောချောငယ် ကိစ္စ အကုန်လုံး ဇွဲပင် လိုက်လုပ်ပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်သည်။ မသိတဲ့သူဆိုလျှင် ချောချောငယ်ကပင် သူ့ရည်းစား .. သူ့စော်လို ထင်မိမှာ သေချာသည်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘော့စ်က ဒီယုန်မြင်လို့ ဒီခြုံထွင်တာ ဖြစ်ရမည်။
“တောက် !! .. မစားရ အညှော်ခံပဲ”
“ဟင် .. ဗျာ .. ဘာညှော်လို့လဲ .. ကျနော်တော့ ဘာအနံ့မှ မရပါဘူး”
နှုတ်မှ ယောင်ယမ်းပြီး မကျေမနပ်နှင့် ရေရွတ်မိတော့ ကြားသွားသည့် ကားသမားက အူကြောင်ကြောင်နှင့် သူ့ကို လှမ်းပြောသည်။ ဇွဲတစ်ယောက် ရှက်ရှက်နှင့် မောင်းမှာသာ မောင်းဗျာ ..ဘာညှော်မှ မဟုတ်ဘူးဟု ခပ်မာမာ ပြောလိုက်မိတော့သည်။
ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ဖုန်းဆက်ထားသည် ဆိုလို့လား မသိ ချောချောငယ်က သူ့ထက် အရင် ကွန်ဒိုခန်းကို ရောက်နေရှာသည်။ လူခေါ်ဘဲလ်ကို နှိပ်လိုက်တော့ တိုက်ခန်းတံခါးကို အပြေးအလွှား လာဖွင့်ပေးရှာသည်။ မျက်နှာလှလှလေးသည် Miss အဖြစ် အရွေးခံရတုန်းကနှင့် တခြားစီ၊ ပူပန်ကြောင့်ကြမှုအသွင်တွေ ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။
“ဇွဲ .. ဘယ်လို လုပ်ကြမှာလဲ .. ပြောပါဦး .. ငါတော့ ရင်တွေ တုန်လိုက်တာ ..”
ချောချောငယ်တစ်ယောက် ရင်တွေတုန်နေသလို ဇွဲကိုယ်တိုင်လည်း ရင်တွေတုန်သွားသည်။ သူ ရင်တုန်ရခြင်းက ချောချောငယ်သည် သူမအိမ်ကနေ ကမန်းကတမ်းများ ထွက်လာသည်လား မသိ။ အိမ်နေရင်းအဝတ်အစားလို့ ဆိုရမည့် ချည်သားဂါဝန်ပါး တစ်ထည်သာ တစ်ခုတည်းသော အဝတ်အစားအဖြစ် ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဂါဝန်က ကြိုးတစ်ချောင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းက ရှင်းလင်းနေရာ၊ အောက်ခံဘရာကြိုး အနက်ရောင်လေးသာမက မို့မို့ဝင်းဝင်း ရင်သားအပေါ်ပိုင်းတွေပါ မြင်နေရသည်။ နို့လုံးလုံးဖွေးဖွေးနှစ်ခုကြားက အလယ်မြောင်းနေရာသည်လဲ ပစ္စည်းရှိ လူတန်းစားဖြစ်သည့်အလျောက် ထင်းခနဲကို လှစ်ဟပြနေရှာသည်။
“နေ .. ပါ .. ဦး ဟ .. ငါ အိမ်ထဲ ဝင်ပါရစေဦး”
ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ စပွန်ဆာကိစ္စကြောင့် ရင်းနှီးနေခဲ့ပြီမို့ ဇွဲနှင့် ချောချောငယ်က ပြောမနာဆိုမနာ ဖြစ်နေရှာသည်။ အိမ်ထဲသို့ သူမရှေ့က လျှောက်ကာဝင်လာရင်း ပါကေးအပြည့်ခင်းထားသော ဧည့်ခန်းထဲက အကောင်းစား နှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင် အခန့်သား ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ချောချောငယ်က သူ့နောက်က ပါလာပြီး မျက်စောင်းထိုးနေရာက တစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာခုံတွင် ဝင်ထိုင်သည်။ ဝတ်ထားသည့် ဂါဝန်က ဒူးခေါင်းဖုံးယုံသာ ရှိသည်မို့ ခြေသလုံးသားဝင်းဝင်းလေးတွေကို လှမ်းမြင်နေရသည်။ ဇွဲ မျက်လုံးတွေက တဒင်္ဂတော့ ထိုနေရာတွေမှာ ရပ်တန့်သွားသည်။
ဦးမိုးလုံးဟိန်းထံတွင် တခြားစပွန်ဆာကောင်မလေးတွေ ရှိသော်လည်း ချောချောငယ်က သူနှင့် ပတ်သက်နေသည်မို့ တခါတလေတော့လဲ ဇွဲ သူမကို သနားမိသည်။ တခါတလေတော့လဲ သူမကို အားကျမိသည်။ သိန်းဂဏန်းအားဖြင့် ထောင်ကျော်တန်မည့် တိုက်ခန်းတစ်ခန်းအပြင်၊ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးဆိုပြီး မှန်မှန်ရနေသည့် ဘဝ။ ဒီကြားထဲ အခြေအနေပေးရင် ပေးသလို နိုင်ငံခြားထွက် ရှော့ပင်းပတ်တာက ရှိသေးသည်။ သာယာလိုက်တဲ့ ဘဝ ..။ တောက် .. ငါလဲ စပွန်ဆာ ရှာဦးမှပဲ .. ဒေါ်နန်းယမုံက ငါ့စပွန်ဆာပေးလို့ကတော့ မူတောင် မူမနေဘူး .. ချက်ချင်း ခေါင်းညိတ်ပစ်လိုက်မှာ ..
“ဇွဲ .. ပြော .. ပြောဦး .. ငါတို့က ဘာလုပ်ရမှာလဲ??”
ချောချောငယ်၏ စကားကြောင့် ဇွဲ သူလာရင်း ကိစ္စကို သတိရသွားသည်။ အချိန်ဖြုန်းနေလို့ မဖြစ်။ မြန်မြန်ပြီး မြန်မြန်ပြန်မှ။ တော်ကြာနေ ချောချောငယ်နှင့် နှစ်ယောက်ထဲ ဘာဖြစ်လို့ ကြာနေလဲဟု ဦးမိုးလုံးဟိန်းက လိုက်ရစ်နေဦးမည်။ သူ့ဘောင်းဘီထဲက ဖုန်းကို ထုတ်ပြီး ချောချောငယ်အား သူတို့နှစ်ယောက်အတူ သမီးရည်းစားအဖြစ် ဟန်ဆောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရမည့်အကြောင်း ရှင်းပြလိုက်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ၏ လက်မှ လွတ်ဖို့ ဒီကိစ္စက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုလည်း ရှင်းပြလိုက်ရာ ချောချောငယ်က မဆိုင်းမတွပင် လက်ခံသည်။ နှစ်ယောက်အတူတွဲ ဆယ်ဖီရိုက်ဖို့ ဇွဲထိုင်နေရာ ဆိုဖာသို့ သူမ ပြောင်းပြီးလာထိုင်သည်။
“ဘယ်လိုနေရမှာလဲ .. ဇွဲ”
လူချင်း ပူးကပ်သွားပြီး ချောချောငယ်က သူ့ဘက်သို့ လှည့်ပြီး လေသံတိုးတိုးနှင့် မေးသည်။ ရုတ်တရက်တော့ ဇွဲ ချောချောငယ်ကို အဖြေပြန်မပေးနိုင်။ သူ့အကြည့်တွေက နီးကပ်စွာ ရှိနေသော ချောချောငယ်၏ မျက်နှာလှလှလေးကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ အထူးသဖြင့် ဆေးမဆိုးဘဲနှင့် သန္တာရောင်တောက်နေသော နှုတ်ခမ်းလေးတွေ။ အင်း .. ဒီ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ဖိပြီး နမ်းလိုက်ရရင် ..
“ဇွဲ !! .. ပြောဦးလေ”
“အော် .. အင်း .. လာ .. ဒီဘက်တိုး”
သူ့ပုခုံးကို ပုခုံးချင်းတိုက်ကာ ချောချောငယ် မူနွဲ့နွဲ့နှင့် ပြောမှ ဇွဲတစ်ယောက် အတွေးအိပ်မက်မှ နိုးပြီး ကမန်းကတမ်း ပြောရရှာသည်။ ချောချောငယ် သူ့စကားအတိုင်း လူချင်းထိစပ်အောင် တိုးထိုင်လိုက်သောအခါ သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူအောင် ဖက်မယ်နော်ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းလိုက်သည်။ ချောချောငယ်က ဖက်လေဟု နွဲ့ကာ အပြောတွင် လက်တစ်ဖက်ကို သူမ ပုခုံးပေါ်ကျော်၍ ဖက်လိုက်သည်။ ချောချောငယ်က သူ့ရင်ခွင်ထဲပါကျလာသလို၊ သူ့လက်ကလဲ အကာအကွယ်မဲ့သော လက်မောင်းသားတစ်ဖက်ကို စမ်းမိသည်။
“ဆယ်ဖီ ရိုက်မယ်နော် .. ချောငယ် .. ဒီမှာကြည့် ..”
လက်တစ်ဖက်နှင့် ကိုင်ထားသော ဖုန်းကို မြှောက်လိုက်သည်တွင် သူရော၊ ချောချောငယ်ပါ ဖုန်းစကရင်ကို လှမ်းကြည့်သည်။ အခုတော့ ချောချောငယ် မျက်နှာက ခုနတုန်းကနှင့် မတူ၊ ပြုံးစစနှင့် ဖြစ်နေရာ နဂိုချောသည့် မျက်နှာလေးက ဝင်းဝင်းလှလှလေး ဖြစ်နေသည်။ ကလစ်ဆိုသည့် အသံနှင့်အတူ သူတို့နှစ်ယောက် ဖက်ထားသည့် ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ပြီးသွားသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ ထပ်ရိုက်ဦးမယ်ဟု ဇွဲက အပြောတွင် ချောငယ်က ခေါင်းကလေးအသာငုံ့ပြီး လက်တစ်ဖက်က ဇွဲခါးကို လာဖက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ်ကို မြှောက်ပြရင်း ဟန်ပါပါပြုံးသည်။ ကလစ်ခနဲ မြည်အောင် ဇွဲ တစ်ပုံထပ်ရိုက်လိုက်သည်။
“ဒီလောက်နဲ့တော့ ရဦးမယ် မထင်ဘူး .. ချော .. ဒေါ်နန်းယမုံက ထက်တယ်ဟ ..”
“ဒါဆို ဒီဘွားတော် ယုံအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ .. နင်နဲ့ ငါ ကစ်ဆင်ဆွဲရမလား”
ချောငယ်၏ စကားကြောင့် ဇွဲ မျက်လုံးပြူးသွားရသည်။ နားထဲတွင် ဦးမိုးလုံးဟိန်း မှာလိုက်သော စကားကို ပြန်ကြားယောင်မိသည်။ ချောငယ်ဆီကသာ သတင်းပြန်ကြားလျှင် သေချာတာကတော့ သူ အလုပ်ပြုတ်မည့်ကိန်း။ ချောငယ်ပြောသည့် အစီအစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားပေမယ့် (ဟီး) ကိုယ့်ဘက်ကိုတော့ လွတ်အောင် အရင်ကာထားမှ ဖြစ်မည်။
“အဲဒါကတော့ အကောင်းဆုံးပဲ .. ဒါပေမယ့် ဘော့စ်အထင်လွဲမှာလဲ စိုးရတယ် .. ငါ အခွင့်အရေးယူတာ မဟုတ်ဘူးနော် ..”
“အာ .. ဇွဲကလဲ .. ငါ နင့်ကို ဘယ်လိုမှ မထင်ပါဘူး .. တကယ်ဆို ဒီထက်မက နင့်ကို ငါဂရုစိုက်သင့်တာ .. ငါ့အပေါ် အထင်မသေးဘဲ နင် ဆက်ဆံခဲ့တာပဲ”
“ချောငယ် .. နင် တကယ်ပြောနေတာလား”
“တကယ်ပါ .. ဇွဲ ရယ်”
ဇွဲနှင့် ချောချောငယ် အကြည့်ချင်း မလွှဲဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စိုက်ကြည့်နေကြသည်။ ဇွဲ၏ မျက်ဝန်းထဲက အကြည့်သည် လိုလားတပ်မက်မှုနှင့် ပြည့်နေပြီး၊ ချောချောငယ်၏ အကြည့်များက ဖိတ်ခေါ်မှုအပြည့်နှင့် ရီဝေနေရှာသည်။ ဇွဲ၏ မျက်နှာက ရှေ့သို့ တဖြေးဖြေချင်း တိုးသွားသည်တွင် နှုတ်ခမ်းနီနီပြည့်ပြည့်လေး တစ်စုံကက မော့၍ ရှေ့ထွက်လာသည်။ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခု ဖြေးညင်းစွာ ထိတွေ့လိုက်ခြင်းသည် သူတို့နှစ်ဦးအတွက် ရှေ့ဆက်ဖို့ အစပျိုးလိုက်တာနှင့် တူနေလေသည်။
နှစ်ဦးသား ရွရွလေး နမ်းနေရာကနေ တော်တော်ကြာတော့ အရှိန်တက်လာပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းအဆင့်သို့ အလိုလို ကူးပြောင်းသွားသည်။ ချောချောငယ်၏ လျှာလေးကို ဇွဲက သူ့လျှာနှင့် ဆွပေးသလို၊ သူ့လျှာကို အရုတ်တွင် ချောချောငယ်က သူမလျှာလေးနှင့် တဖန်လိုက်ဆွဲသည်။ အပေါ်ဘက်ပိုင်းတွင် ထိုသို့ Kiss နှင့် နှစ်ပါးသွား နစ်မျောနေသလို၊ အောက်ဘက်တွင်လည်း ဇွဲလက်တွေက အပြတ်လှုပ်ရှားနေသည်။ လက်တစ်ဖက်က ချောချောငယ်အား သိုင်းဖက်ထားပြီး၊ ကျန်တစ်ဖက်ကမူ ရင်သားလုံးလုံးတစ်ဖက်ကို ဂါဝန်ပေါ်ကနေ အုပ်ကာ ဆော့ကစားသည်။ ချောချောငယ်ခမျာတော့ သူ့လည်ပင်းကို လက်ယှက်ကာ ဖက်ထားရင်း ကြောင်ပေါက်စလေးလို တအင်အင် ညည်းနေရှာသည်။
“လာကွာ .. ဇွဲ .. အခန်းထဲ သွားရအောင်”
“အင်း .. သွားလေ”
ချောချောငယ်၏ ကိုယ်လုံးအိအိလေးကို ဆွဲပွေ့ချီပြီး ဇွဲပင် ရှေ့ဆောင်ကာ အိပ်ခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်။ အခန်းအလယ်ရှိ အကောင်းစား နှစ်ယောက်အိပ်မို့ရာကြီးကို မြင်တော့ ဟန်ကျလေခြင်းဆိုပြီး ပြုံးမိသည်။ ချောငယ်ကတောင် ဘာပြုံးတာလဲဟု လှမ်းမေးရာ၊ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး .. ချောနဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ရလို့ဆိုပြီး ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ သူမကိုယ်လုံးလေးကို စွေ့ခနဲ ကုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး ဝတ်လာသည့် အဝတ်တွေကို အမြန်ချွတ်သည်။ ချောချောငယ်ကလဲ အားကျမခံ သူမဝတ်ထားသော ဂါဝန်လေးကို ခေါင်းပေါ်မှ မြှောက်ချွတ်လိုက်သည်။
ပန်းဆီရောင်တောက်နေသော ဘရာလေးကို လက်နောက်ပြန်ခေါက်၍ ဖြုတ်လိုက်သည် ရှိသေး .. စိတ်ဇောတွေ တက်နေပုံ ရသည့် ဇွဲက သူမကိုယ်ပေါ် ပြိုဆင်းလာသဖြင့် ချောချောငယ် ယောင်ယမ်း၍ ညည်းမိသည်။ ထူထဲသော ဇွဲနှုတ်ခမ်းတွေက ဘရာမလွတ်သေးသည့် ရင်သားဖွေးဖွေးတစ်ဖက်ကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်တော့ သူမကိုယ်လေး ကော့သွားရှာသည်။ ဇွဲ နှုတ်က လှလိုက်တာ ချောရယ်ဆိုပြီး ရေရွတ်လိုက်ပြီး ရင်သားတွေအား ဖုံးထားသော ဘရာလေးကို ဆွဲချွတ်သည်။ လှပ်ခနဲအေးသွားသော ခံစားမှုနောက်တွင် နွေးထွေးသော နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိစုပ်ခြင်းကို သူမနို့သီးခေါင်းလေးတစ်ဖက် ခံလိုက်ရသည်။
“အင်း …. ဇွဲ …. အာ့ ..”
မသေးလွန်း မကြီးလွန်းသော နို့သီးလေးနှစ်ဖက်ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စုပ်ရင်း ဇွဲ သူ့အဖြစ်အပျက်ကိုတောင် အံ့အားသင့်နေမိသည်။ မနက်ခင်းတုန်းက မမျှော်လင့်ဘဲ နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်ကို အချောင် လိုးလိုက်ရသည်။ အခုကျတော့တစ်ခါ ချောချောငယ်ကို ဖြုတ်ရဦးမည်။ ဤအတိုင်းသာဆို ဒီဇင်ဘာလ အကုန်မှာ ရမည်ဆိုသော ဘောနပ်စ်တောင် ဒီနေ့ အဖြစ်အပျက်နှင့်တင် ညီမျှသွားမှာ သေချာပါသည်။ စိတ်ထဲ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ဖြစ်သွားသည့်အလျောက်၊ ချောချောငယ်သည် ဦးမိုးလုံးဟိန်း စပွန်ဆာ (ဘော့စ်၏ ဘာညာသာရကာ) ဆိုတာကို မေ့သွားပြီး ဇွဲနှုတ်ခမ်းက အောက်ဘက်သို့ ဆင်းသွားရှာသည်။
“အင့် … ဇွဲ … လျက် … လျက် .. ကောင်းတယ် .. အစိလေးလဲ စုပ်ပေးဦး … မရပ်နဲ့ .. အာ့ .. အာ”
နှစ်ယောက်အိပ် အိပ်ရာကြီး၏ တစ်ဖက်စွန်းတွင် ပန်းဆီရောင် ဘရာလေးနှင့်အတူ ပင်တီသေးသေးလေးက တွန့်လိမ်ကာ လဲလျောင်းနေသည်။ မိနစ်ပိုင်းမျှ အချိန်ကာလတစ်ခု ကြာပြီးသွားသောအခါ ထိုအရာများကို ထပ်၍ ဇွဲ၏ အောက်ခံဘောင်းဘီက နေရာယူသွားသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီ၏ ဘေးတွင် ထပ်မံ၍ ရောက်ရှိသွားသည်က ထောင့်စွန်းလေး ပြဲနေသော ကွန်ဒွန်းအိတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်း ဇွဲ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် လိုလိုမယ်မယ်ထည့်ဆောင်ထားသော ကွန်ဒွန်းနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခု ..
“ဖြေး ဖြေး .. နော် .. ဇွဲ .. ဇွဲဟာကြီးက ကြီးတယ်”
ဦးမိုးလုံးဟိန်းဟာက ဘယ်လောက်ကြီးသည် မသိသော်လည်း၊ ကိုယ့်ဟာကြီးကို ကြီးသည်ဟု အပြောခံရလိုက်မှုကြောင့် ယောက်ျားလေးတို့ သဘာဝ သွေးနထင်တောင် ရောက်သွားသည်။ လျှာနှင့် ကောင်းကောင်းကျွေးထားခဲ့သဖြင့် အရည်ကြည်ပေါင်းစုံနှင့် ပြောင်လက်နေသောအကွဲကြောင်းလေးပေါ်သို့ ထိပ်ဖူးကို အရင်တင်သည်။ အစွပ်စွပ်ထားသဖြင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် အရသာတော့ မရပေမယ့်၊ ကျေနပ်မှုကတော့ အပြည့်ဖြစ်နေရာ ထိုအတွေ့နှင့်ပင် ဇွဲတစ်ယောက် ရှိန်းခနဲ ဖြစ်သွားရသည်။ နှစ်ချက်သုံးချက်လောက် အကွဲကြောင်းတလျှောက် ပွတ်ပွတ်ဆွဲပေးပြီး၊ ခနအကြာတွင် အောက်ဘက်တွင် ရှိနေသော ကျပ်ပြားဝိုင်းပေါက်လေးထဲ ဖိသွင်းလိုက်သည်။
အူးခနဲ အားခနဲ ညည်းသံက နှစ်ယောက်စလုံး နှုတ်ဖျားမှ တပြိုင်တည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားပေးထားသည့် ချောချောငယ် ခြေတန်တွေ ပို၍ ကားထွက်သွားပြီး၊ ဇွဲ၏ ဖင်ကြီးကမူ ရှေ့သို့တိုးကာ
နေရာထပ်ယူလိုက်သည်။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နှင့် ဝင်နေသော လီးက အဖုတ်အတွင်းသားနံရံတွေကို ပွတ်တိုက်ပြီး ထပ်ဝင်ပြန်သည်။ အရမ်းကြီး တင်းကျပ်နေတာမျိုး မဖြစ်ပေမယ့်၊ စီးစီးပိုးပိုး ထိထိမိမိတော့ ရှိလိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ နှစ်ယောက်စလုံး မျက်ဝန်းတွေ တိုင်ပင်ထားသလို မှိတ်ကျသွားသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ ..
လေးဆယ့်ငါးမိနစ်ဆိုသော အချိန်သည် ခြေရည်တူ ဘောလုံးအသင်းနှစ်ခု ရေကုန်ရေခမ်း ကန်နေတာကို ကြည့်နေရသလို ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားရှာသည်။ ဒီလေးဆယ့်ငါးမိနစ်မျှသော အချိန်အတွင်း ချောချောငယ်နှင့် ဇွဲသည် ပိုစရှင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းဖြစ်သွားသည်။ ဘောသမားစကားနှင့်ဆိုရင်တော့ ထိုးစစ်တွေ၊ ခံစစ်တွေ ပြောရမှာဖြစ်သည်။ ဇွဲကအပေါ်ရောက်လိုက်၊ ချောချောငယ်က အပေါ်ရောက်လိုက်နှင့် ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ဘယ်လိုအနေအထားနှင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့လီးကြီးသည် ချောချောငယ် အဖုတ်နှင့် တပ်အပ်ဖြစ်နေခြင်းသာ။ ဘယ်အချိန်မှ ကွာသွားသနည်းဆိုသော် သုတ်ရည်တွေ စိတ်ရှိလက်ရှိ အဖုတ်ထဲမှာ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီးမှ ဖြစ်သည်။ ဗြစ်ခနဲ မြည်ပြီး အဖုတ်ထဲမှ လီးတန်ကြီး ကျွတ်ထွက်လာသည့် အချိန်တွင် အဖုတ်အတွင်းသားများသည်လည်း အရည်ကြည်များနှင့် စိုလက်ကာ ဝင်းပြောင်နေသည်။ ဇွဲ မာန်လျော့သွားသော သူ့လီးကို ငုံ့ကြည့်သည်။ ပျော့တွဲကာ ပါလာသော ကွန်ဒွန်း၏ ထိပ်ပိုင်းသည် သုတ်ရည်တွေရဲ့အလေးချိန်နှင့် အောက်ကို ငိုက်စိုက်ကျနေလေသည်။
“ဒါပဲနော် .. ဇွဲ .. ရှေ့လျှောက် နင် ငါ့ကို ပစ်မထားရဘူး”
“ပစ်မထားပါဘူးကွာ .. စိတ်ချ .. နင်ကလဲ .. ငါတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စကို နင့်လူကြီး မသိစေနဲ့ ..” “ပြောစရာလား .. ကောင်စုတ်ရဲ့.. ငါ နေရာပျောက်သွားမှာပေါ့ .. ဟွန်း”
မူနွဲ့နွဲ့နှင့် အိပ်ရာပေါ်တွင် တတောင်ဆစ်လေးထောက်က ထထိုင်ရင်း ချောချောငယ်က အကျ င်္ီပြန်ဝတ်နေသော သူ့ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးသည်။ ဇွဲက အင်္ကျီဝတ်ပြီးသွားလို့ ဘောင်းဘီဝတ်ရန် မို့ရာပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာနှင့် ချောချောငယ်ကို လှမ်းစသည်။ (အေး .. ကောင်စုတ်လုပ်နေ .. စကားနောက် တရားပါ ..
နောက်တစ်ခါဆိုရင် အဲဒီကောင်ကို စုပ်နေရမယ်) ဟု ဆိုလိုက်တော့၊ ချောချောငယ်က သူမနားရှိ ခေါင်းအုံးတစ်ခုနှင့် ကောက်ပေါက်သည်။ ဇွဲကိုတော့ မထိဘဲ ဘေးနားကို ကျသည်။ တဟားဟားနှင့် ဇွဲ အော်ရယ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာခဲ့တော့ … မို့ရာပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့သေးသူ ချောချောငယ်ထံမှာ ထောပနာပြုသည့်အသံက လိုက်လာသည်။
“ကောင်စုတ် .. စုပ်ပါလိမ့်မယ် .. အားဂျီးဂျီး ..”
ဇွဲ သူ့ရုံးပြန်ရောက်သောအခါ ဦးမိုးလုံးဟိန်းက ရှိမနေတော့။ ရီစက်ရှင်(ဧည့်ကြိုဌာန)က တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အပြင်ထွက်သွားသည်ဟု ပြောသည်။ ဖုန်းခေါ်လျှင် ကောင်းမလား၊ ကောင်းပါ့မလားဟု စဉ်းစားနေတုန်းမှာပင် ဦးမိုးလုံးဟိန်းဆီကနေ ဖုန်းဝင်လာသည်။
“ဘယ်လိုလဲ … ဇွဲ .. ငါ ခိုင်းတာ လုပ်ပြီးသွားပြီလား”
“ပြီးပြီ ဘော့စ် .. အဆင်ပြေတယ် .. အခုပဲ ရုံးပြန်ရောက်တယ်”
“အေး .. အဲဒါဆို .. မင်း ရုံးမှာပဲ ဆက်နေလိုက် .. ငါ့ မိန်းမရောက်လာရင် အဆင်ပြေအောင် ပြောထား .. အဆင်မပြေရင်တော့ မင်း သိမယ် ..”
“ဟုတ်ကဲ့ .. ဘော့စ် .. အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားပါ့မယ်”
နှုတ်ကအလိုက်အထိုက် ပြန်ပြောလိုက်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ကျိန်ဆဲနေမိသည်။ သို့သော် သူ့အတွေးက ချောချောငယ်၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို မြင်ယောင်လာသည်တွင် အလိုလို ပြုံးချင်သွားသည်။ ဆိုးတော့ မဆိုးဘူးဟ .. ဒီလိုမျိုးသာ ဘော့စ်စပွန်ဆာတွေရဲ့ ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် ဟန်ဆောင်ရရင် သူ့အတွက်တော့ တော်တော်အကျိုးအမြတ် ဖြစ်မည့်ကိန်း။ ခူးပြီးခပ်ပြီးသားလေး စားလိုက်ယုံပဲ .. အဟီး 😛
တစ်နေ့ကုန် ညနေစောင်းသည်အထိ ဇွဲတစ်ယောက် ရုံးထဲမှာ ရှိနေပေမယ့် ဦးမိုးလုံးဟိန်း ခန့်မှန်းသလို ဒေါ်နန်းယမုံ ပေါ်မလာပါ။ ဇွဲသာလျှင် ရုံးကိစ္စ၊ ပရောဂျက်ကိစ္စ၊ အစရှိသဖြင့် စာရင်းတွေနှင့် အလုပ်တွေများနေသည်။ ညနေ သူများတွေ ရုံးဆင်းလို့ ပြန်သွားတာတောင် သူ့ခမျာ အလုပ်မပြီးသေးလို့ ဆက်နေရသည်။ ညခုနှစ်နာရီကျော်တော့ မဖြစ်သေးဘူး .. ငါပြန်မှပဲဟု တွေးပြီး ထဖို့ပြင်သည်။ အဲဒီအချိန်မှာတင် ဖုန်းက တင်ခနဲနေပြီး မက်ဆိတ်ဝင်လာသံကြားသည်။ ဖုန်းစကရင် လော့ခ်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တွေ့လိုက်သည်က သူ့ဘော့စ်ဆီက။
“Tomorrow come to office” (မနက်ဖြန် ရုံးသွားတဲ့)
ပုံမှန်ဆို ဇွဲတို့အလုပ်က စနေနေ့ လာစရာမလို။ ရုံးပိတ်သည်။ အရမ်းအလုပ်များသည့် အချိန်မျိုးတွင်သာ အိုဗာတိုင် သဘောမျိုး လာလာဆင်းပေးရသည်။ အင်း .. ထူးတော့ မထူးပါဘူး။ ငါလည်း တကယ်လုပ်စရာ အလုပ်တွေ ရှိနေတာပဲ။ လာလိုက်ပါ့မယ်ဟု ဇွဲ တွေးလိုက်ပြီး (Yes, Boss) လို့ ပြန်ရိုက်လိုက်သည်။ မဆိုင်းမတွဘဲ မက်ဆိတ်ပြန်ဝင်လာသည်က (I play golf with Sein Group) .. ဟင် .. သူ့ ဂေါ့ဖ်ရိုက်တာ ငါနဲ့လဲ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီး အတွေးဝင်သည်မှ မဆုံးသေး .. နောက်ထပ် မက်ဆိတ်တစ်စောင် ထပ်တွေ့ပြန်သည်။ (If my wife came, explain her) ဆိုပဲ။ တောက် !! .. လက်စသတ်တော့ ဒီကိစ္စအတွက် သူ့ကို ရုံးလာခိုင်းတာ ဖြစ်ရမည်။ ကဲပါ .. ထားလိုက်ပါတော့။ မဟုတ်လည်း .. အလုပ်ကိစ္စအတွက် လာရမှာပဲဟု တွေးပြီး ရုံးထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။
အိမ်ပြန်ရတော့မည်ဆိုမှ မနက်ခင်းတုန်းက အဖြစ်အပျက်ကို သတိရပြီး ကောင်းမြတ် အကြောင်းက ခေါင်းထဲ ရောက်လာသည်။ ဒီနေ့တစ်နေ့လုံး သူ့ဆီ ဖုန်းမဆက်ပုံ ထောက်တော့ ကြည့်ရတာ နွဲ့ဒါလီက သူနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်တန်းထားပုံ မရ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမြတ် စိတ်ဆိုးနေလျှင် ချော့ဖို့က သူ့တာဝန်မို့ ညစာအတွက် ကောင်းမြတ်ကြိုက်လေ့ရှိသော ဘဲကင်တစ်ကောင်နှင့်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် ပွဲကြီးတစ်ပွဲကို ဝင်ဝယ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့ကပင် ကားငှားပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။
ကောင်းမြတ် ရှိနေမည် ထင်ပေမယ့် တိုက်ခန်းပြန်ရောက်ချိန်တွင် သူ့ကို မတွေ့။ စားစရာထုပ်တွေကို အိမ်ရှေ့ခန်းမှာပင် တင်ထားလိုက်ပြီး ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။ ဖုန်းနှစ်ခါခေါ်သည့်တိုင် ကောင်းမြတ်က မကိုင်သဖြင့် (လဒကောင်)ဟု ကျိန်ဆဲလိုက်ပြီး အခန်းထဲသာ ဝင်လာခဲ့သည်။ နည်းနည်းလေး အေးတေးတေး ဖြစ်နေသော ရာသီဥတုဆိုပေမယ့် တိုက်ခန်းဆိုသည့်အတွက် လှောင်လှသည်။ ရေချိုးလိုက်ဦးမှဟု တွေးပြီး တဘက်တစ်ထည်ဆွဲကာ ရေချိုးခန်းဘက် ဝင်လာခဲ့သည်။ စိမ်ပြေနပြေ ရေချိုးပြီး အပြင်ထွက်လာတော့ အိမ်ရှေ့ခန်းဘက်ကနေ စကားသံတွေ ကြားရသည်။
“ဟွကောင် .. ကောင်းမြတ် .. ငါ့တောင် မစောင့်ဘဲ ဆွဲနေတာလား ဟ”
အိမ်ရှေ့က ဆက်တီစားပွဲတွင် ထားခဲ့သော ခေါက်ဆွဲကြော်ထုပ်ကို ဖွင့်ပြီး အားရပါးရတွယ်နေသူက ကောင်းမြတ်။ သူတစ်ယောက်ထဲသာ မဟုတ်။ မနက်ကတွေ့ခဲ့ရသည့် နွဲ့ဒါလီပါ ရှိနေသည်။ အဝတ်အစားကတော့ မနက်ကတွေ့ခဲ့ရသလို မဟုတ်ဘဲ တီရှပ်အနက်ရောင်ကို၊ ဂျင်းဘောင်းဘီတိုလေးနှင့် တွဲဝတ်ထားသည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ ထိုင်နေရာနားတွင်မူ City Mart တံဆိပ်နှင့် ပစ္စည်းပစ္စယအချို့ကိုတွေ့နေရသည်။ အပြင်ကနေ ဈေးဝယ်ပြီး ပြန်လာတာဖြစ်ရမည်။
“မင်းတောင်မှ ငါ့ဟာကို ဆွဲသေးတာပဲ .. ခွေးကောင်”
“ဟုတ်တယ် .. ပြီးတော့ ကြိုးလည်း ဖြေမသွားပေးဘူး .. ကိုကောင်း သူငယ်ချင်းက မကောင်းဘူး .. ဟွန်း” “မဟုတ်ပါဘူး ဟ .. ကောင်းမြတ်က ဘာလုပ်ဖို့ ပြင်ထားမှန်း မသိလို့လေ .. ကိုယ်ထွက်သွားတော့ သူပြန်လာတာပဲ မဟုတ်လား”
ရန်တွေ့နေသည့် ကောင်းမြတ်တို့အတွဲကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး စကားရောဖောရောလိုက်ကာ သူတို့နှင့်အတူ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ တူတစ်ချောင်းကို ဖောက်ယူ၍လည်း ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကို နှိုက်မြည်းသည်။ နွဲ့ဒါလီက သူ့ကို မျက်စောင်းတစ်ချက်သာ ဟွန်းဆို၍ ထိုးပြီး ဘာမှဆက်မပြော။ သူမအကြည့်တွေက ရေချိုးထားသဖြင့် စိုပြေဝင်းလက်နေသည့် သူ့ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသို့ ရောက်နေသည်ကိုတော့ ဇွဲ သတိထားမိပါသည်။
“ဟေ့ကောင် .. အင်္ကျီသွားဝတ် .. မင်း ဗလတွေ ပြပြီး ငါ့ အချစ်လေးကို လာဖျာရောင်း မနေနဲ့ .. သွား .. သွား !!”
ဆက်တီစားပွဲအောက်က Megazine စာအုပ်အဟောင်းတစ်ခုနှင့် ကောက်ပေါက်ခံလိုက်ရသဖြင့် တဟားဟားနှင့် ထရယ်ပြီး ဇွဲ သူ့အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာခဲ့သည်။ အိမ်နေရင်းအဖြစ် တီရှပ်တစ်ထည်နှင့် ဦးဂျမ်းပုဆိုးတစ်ထည်ကို ကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး အပြင်ပြန်ထွက်လာသည်။ ဇွဲ အိမ်ရှေ့ပြန်ရောက်လာတော့ ခုနတုန်းက ခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် ဘဲကင်သာ ရှိသော စားပွဲပေါ်တွင် မိုးမိုးမတ်မတ်ရပ်နေသော အရာတစ်ခုရှိနေသည်။ ဘလက်ခ်လေဘယ် တစ်ပုလင်းသာ …။ ထို့နောက်တွင်တော့ ..
ယစ်ရွှေရည်ဆိုသည်ကား လူတစ်ယောက်၏ စဉ်းစားဉာဏ်ကို ဖုံးကွယ်သွားစေတတ်ပြီး၊ ကိုယ်အတွင်းမှ ကိန်းအောင်းနေသော ဆိုးသွမ်းသည့်စိတ်ကို အပြင်ရောက်လာအောင် ထုတ်ပြတတ်သော မျက်လှည့်ဆရာတစ်ဦးပင်။ ဇွဲတို့ သုံးယောက်လည်း ဘလက်ခ်လေဘယ် တန်ခိုးနှင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ဟီးဟီးဟားဟားနှင့် စကားတွေပြော၊ ကာရာအိုကေခွေ ဖွင့်ပြီး သီချင်းတွေ လိုက်အော်ကြနှင့် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေသည်။ တော်တော်လေးကြာတော့ မနက်ဖြန် အလုပ်သွားရဦးမှာဆိုပြီး အသိရှိနေသေးသူ ဇွဲက ၀ိုင်းမှ အရင်ထပြီး အိပ်ခန်းထဲဝင်လာသည်။ ကိုယ့်အိပ်ယာကို ကိုယ်ပြန်ရောက်တွင် တခြားဘာဆိုဘာမှ စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာအပ်ကာ မှောက်ချလိုက်သည်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သူ့အသိအား အမိုက်မှောင်က ဖုံးလွှမ်းသွားသည်။
(….. ZZZZZZZZZZ ….)
ခပ်ဝေးဝေးက လာသလို နားထဲတွင် အသံသဲ့သဲ့တွေကို ကြားရသည်။ ကြားခါစက ဘာသံတွေမှန်း မသိပေမယ့် တစတစ အသံတွေပို၍ သဲကွဲလာသည်။ တအီးအီး တအားအားနှင့် ညည်းသံတွေဖြစ်ပြီး အသံတွေက သူ့ဘေးနားမှာပင် ကြားနေရသည်။ ဖိပြီးတော့ အိပ်မိထားလို့ အနည်းငယ်ကျင်နေသည့် လက်တစ်ဖက်ကို လှုပ်ပြီး၊ ထိုလက်ဖြင့်ပင် သူ့မျက်လုံးကို ပွတ်ကြည့်သည်။ အမြင်အာရုံတွင် စူးခနဲ ဖြစ်သွားမှုကြောင့် မျက်တောင်ကို တဖျတ်ဖျတ်ခပ်လိုက်ရာ အခန်းမီးကို ဖွင့်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဟိုကောင် .. ကောင်းမြတ် မီးမပိတ်ဘဲ ဘာလုပ်နေတာလဲဟု ခပ်ငေါက်ငေါက် လှမ်းမေးမည်ပြုလိုက်ပေမယ့် မေးခွန်းထုတ်သည့်ဆီသို့ မရောက်လိုက်ပါ။
“အင်း … ကောင်းတယ် … ဒါလီ .. အဲ့လိုမျိုး ခါးကိုလှုပ်ပေး”
“ဒါမျိုးလား .. ခိ .. ခိ”
“ဟုတ်တယ် .. အဲ့လိုမျိုး … ထိ .. ထိတယ်ကွာ”
မြင်ကွင်းကတော့ ပက်ပက်စက်စက်ကို လှနေသည်။ ကိုယ်လုံးတီးနှင့် ဖြစ်နေကြသော ကောင်းမြတ်နှင့် နွဲ့ဒါလီသည် .. ကောင်းမြတ်က အောက်ကပက်လက် .. နွဲ့ဒါလီက အပေါ်က ဖြစ်နေသည်။ ကောင်းမြတ်ခြေရင်းကို မျက်နှာမူကာ နွဲ့ဒါလီက တက်ခွထားပြီး တင်ပါးလုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးတွေက ကောင်းမြတ်ဆီးစပ်နှင့် ဖိကပ်နေသည်။ ဇွဲကြည့်နေစဉ်မှာပင် နွဲ့ဒါလီက သူမခါးကို ဝေ့ကာဝိုက်ကာနှင့် လှုပ်ရှားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကောင်းမြတ်တစ်ယောက် မှီထားသည့် ခေါင်းအုံးထက်မှ ဦးခေါင်းကြွတက်သွားသဖြင့် နွဲ့ဒါလီ၏ ဖိကျိတ်ပေးမှုက တော်တော်ကောင်းစေပုံရသည်ဟု ခန့်မှန်းမိသည်။
နှစ်ယောက်ထဲ တစ်ကမ္ဘာလို့ သတ်မှတ်ပြီး ချစ်ပွဲနွှဲနေကြသည့် ကောင်းမြတ်တို့အတွဲကို ကြည့်ရင်း ဇွဲ စိတ်တွေထလာသည်။ နွဲ့ဒါလီ၏ ပါးစပ်ကို မနက်က လိုးခဲ့ရသည်ဆိုသောအချက်နှင့် ချောချောငယ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ဖြုတ်ခဲ့ရသည်ဆိုသော အဖြစ်အပျက်တို့ကြောင့် ဇွဲ၏ ဆက်စ်ဒရိုက် (ကာမမောင်းနှင်မှုအား) က တက်ကြွနေသည်။ ခါတိုင်း ဒါမျိုးအဖြစ်အပျက်နှင့် ကြုံလျှင် ကောင်းမြတ်အား ကျောပေး၍ အိပ်နေလိုက်သော်လည်း၊ အခုတော့ ထိုသို့ မလုပ်ဖြစ်။ မလုပ်ဖြစ်သည့် အပြင် ကိုယ်ကိုပါ သူတို့ရှိရာဘက်သို့ ထပ်မံ၍ စောင်းလိုက်ရာ ကောင်းမြတ်က သူနိုးနေသည်ဆိုတာကို အရင်ဆုံး သတိပြုမိသွားသည်။
“ဟွကောင် .. တရေးနိုးလာပြီလား .. ဟီး”
“ဟိုင်း .. ကိုဇွဲ … ခိ .. ခိ”
ကြည့်ရတာ နှစ်ယောက်စလုံး မှန်နေပုံရသည်။ ကောင်းမြတ်က အခွက်ပြောင်နေသလို၊ နွဲ့ဒါလီကလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်မနေ။ ဒီအခြေအနေက ဘာကို ဆိုလိုသည်မှန်း ဇွဲ ရိပ်မိသည်မို့ ခပ်တည်တည်ပင် အိပ်နေရာက ကောက်ထပြီး ကောင်းမြတ်တို့ အတွဲရှိရာသို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ လမ်းထလျှောက်လိုက်မိတော့ ပုဆိုးအောက်မှ ထောင်ထောင် ဖြစ်နေသည့်အကောင်က သုံးယောက်စလုံး သတိပြုမိစရာအဖြစ် မြောက်ကြွမြောက်ကြွနှင့် အချက်ပေးနေသည်။
“ဟွကောင် .. အပေါ်ပိုင်းပဲနော် .. တခြားဟာတွေ မပါဘူး”
ကောင်းမြတ်က မှန်သာမှန်နေပေမယ့် ဇွဲပစ္စည်း၏ အနေအထားကို သိနေသည့်အလျောက် သတိတရနှင့်
လှမ်းတားသည်။ ဇွဲလည်း ကောင်းမြတ်နှင့် ပြိုင်၍ ဈေးဆစ်မနေ။ လောလောဆယ်တွင် တင်းမာထောင်တက်နေသော သူ့လီး ပျော့သွားဖို့သာ အာရုံထဲရှိပါသည်။ ဘယ်အပေါက်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရဖို့က အဓိက။ သူ့ကို ညုတုတု မျက်နှာပေးနှင့် ကြည့်နေသော နွဲ့ဒါလီ၏ ရှေ့သွားရပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးစကို ဖြေချလိုက်သည်။
“၀ိုး .. ကျောင်းဆရာကြီးပါလား .. ကိုဇွဲ … ခိ .. ခိ”
ပါးစပ်ကသာ ဒီလိုအသံထွက်လာပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ သူ့ဟာကြီးကို သဘောကျမှန်း ချက်ချင်းဆိုသလို လက်သွယ်သွယ်လေး တစ်ဖက်နှင့် ဖမ်းဆုပ်လိုက်မှုကြောင့် ဇွဲ နားလည်လိုက်ပါသည်။ နွဲ့ဒါလီ လက်နှင့်ဆွဲခေါ်ရာသို့ ဖင်ကို ထပ်တိုးပေးလိုက်သည်တွင် နှုတ်ခမ်းနီနီလေးနှင့် ထိပ်ဖူးနီတာရဲကြီး နီးစပ်သွားသည်။
“အ .. အင့် .. ကိုကောင်း … ကြမ်းလှချည်လား .. ဒါလီ ခါးလေး ကျိုးသွားမယ်နော် .. ခိ .. ခိ”
နှုတ်ခမ်းလေးကိုဟ၍ လီးဒစ်ကို ငုံလိုက်မည်အပြုမှာပင် နွဲ့ဒါလီကိုယ်ကလေးက မြောက်တက်သွားလို့ ချိန်သားလွဲသွားသည်။ အောက်ဘက်မှာ ရှိနေသူ ကောင်းမြတ်က သူ့အစွမ်းကို ပြချင်သည့်နှယ် ဒါလီခါးလေးကို လက်နှင့်ညှပ်ကိုင်ပြီး ပင့်ဆောင့်လိုက်ပုံရသည်။ ဇွဲ နှုတ်ခမ်းထောင့်လေး ကွေးသွားအောင် ပြုံးမိသည်။ ကောင်းမြတ်ရဲ့ဒီအထာတွေက ရိုးနေပြီ။ ကောင်းမြတ် အောက်ကနေ ဘာတွေလုပ်နေသည်ကို ဂရုစိုက်မနေတော့ဘဲ အပေါ်အောက် ယမ်းခါနေသော နွဲ့ဒါလီခေါင်းကို လှမ်းကိုင်ပြီး ပါးစပ်ပေါက်လေးထဲ လီးတန်အား ထိုးထည့်လိုက်သည်။ (အား … ဇိမ်ရှိလိုက်တာ …)
ဇွဲနှင့် ကောင်းမြတ်တို့အတွဲ ထိုညက ကောင်းကောင်းကြီး သရီးဆမ်းလိုက်ကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒါမျိုးက ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ မဟုတ်လို့ နှစ်ယောက်စလုံးက အတွဲညီကြသည်။ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံအဖြစ် သင်ခန်းစာတွေ တပြုံကြီး ရရှိသွားသူကား နွဲ့ဒါလီ။ မနေ့ညက တဟင့်အင်းထဲ ဟင့်အင်းခဲ့သော နောက်ပေါက်လေးသည်လည်းပဲ ကောင်းမြတ်အဖွင့်ကို ခံလိုက်ရသည်။
ကောင်းမြတ်အတွက် ကျေနပ်ဖို့ ဖြစ်သလို .. နွဲ့ဒါလီအတွက်လည်း ကျေနပ်စရာက အကြိမ်ပေါင်းကို မရေတွက်နိုင်တော့။ ဇွဲအတွက်ကမူ ကျေနပ်ချက်က နှစ်ကြိမ်ထက် မပိုလိုက်။ တော်ပြီလေ။ တစ်နေ့တာအတွင်း လေးကြိမ်ဆိုသော စံချိန်သည် နည်းမှ မနည်းတာ။ ဒီနေ့အဖို့တော့ ဒီလောက်ပဲ။ မနက်ဖြန်ဆိုတာက ရှိသေးသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမြတ်နှင့် နွဲ့ဒါလီက ကြည်ဖြူတိုင်း အသားကုန်ဆွဲလို့တော့ မဖြစ်။ တော်ကြာနေ ကောင်းမြတ်က သူ့ကို ဖုသွားမှာ စိုးရသေးသည်။ လောလောဆယ်တွင် သူက ကောင်းမြတ်အခန်းမှာ ကပ်ခိုနေရသည် မဟုတ်လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နွဲ့ဒါလီ၏ အဖုတ်ကို လုပ်လိုက်ရသည့်အတွက် ဇွဲ ကျေနပ်ပါသည်။ နွဲ့ဒါလီလည်း ကျေနပ်သည်ဆိုတာ ဆူညံပွက်လောရိုက်အောင် အော်ညည်းပြီး အပြီးကြမ်းနှင့် ပြီးသွားမှုကြောင့် သေချာလှပါသည်။ တော်လောက်ပြီ အိပ်တော့မည်ဆိုပြီး သူ့ဘက်ခြမ်းကို ပြန်ကူးဖို့ ပြင်တော့ နွဲ့ဒါလီက မသွားနဲ့ဦး
ကိုဇွဲဆိုပြီး သူ့လက်ကို လှမ်းဆွဲနေသေးသည်။ ဇွဲက မနက်ဖြန် ရုံးတက်ရမှာမို့ အိပ်တော့မယ် .. ဂွတ်နိုက်လို့ စကားဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့ရသည်။ တကယ်လည်း ကိုယ့်အိပ်ရာပြန်ရောက်တော့ စောင်ခေါင်းမြီးခြုံ၍ ထိုးအိပ်လိုက်သည်။ ကောင်းမြတ်နှင့် နွဲ့ဒါလီ ဘယ်လို ဆက်စခန်းသွားသည်ကို ဂရုမစိုက်နိုင်အားတော့ ….
စနေနေ့မနက် ရုံးသွားရခြင်းကို သင်သာ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ဆိုလျှင် ကြိုက်နှစ်သက်မည် မဟုတ်ပါ။ ဇွဲလည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဒီနေ့တော့ အလုပ်ကိစ္စတွေ ရှိနေသည့်အပြင် ဘော့စ်ရဲ့ မိန်းမကိစ္စကလည်း ရှိနေသဖြင့် ကျိတ်မှိတ်ကာ ရုံးကို ထွက်လာခဲ့ရသည်။ ဇွဲ ထင်ထားသည့်အတိုင်း ရုံးရောက်တော့ တစ်ရုံးလုံးတွင် သူနှင့် ငွေစာရင်းဌာနက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သာရှိသည်။ ထိုတစ်ယောက်ကလည်း ဖိုင်တစ်ခု ရုံးမှာ ကျန်ခဲ့လို့ ပြန်လာယူတာသာ ဖြစ်ပြီး၊ ဖိုင်တွေ့ပြီးနောက် နာရီဝက်အကြာတွင် ပြန်တော့မည်ဆိုပြီး ပျောက်သွားသည်။ ဇွဲသာလျှင် စာရင်းရှင်းတမ်းများနှင့် နပန်းလုံးလျက် ကျန်ခဲ့ရှာသည်။
ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ် အာရုံရောက်ပြီး မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်နေသဖြင့် အချိန်မည်မျှ ကြာသွားမှန်း ဇွဲ သတိမထားမိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မေ့လျောသလို ဖြစ်နေရာ တဒေါက်ဒေါက်နှင့် အသံထွက်လာမှ အသံလာရာဘက်သို့ လှမ်းကြည့်မိသည်။ ထိုရောအခါ ဇွဲတစ်ယောက် အသက်ရှူဖို့ရန် မေ့လျော့သွားစေနိုင်သော မြင်ကွင်းတစ်ခုအား တွေ့လိုက်ရသည်။
တိတ်ဆိတ်နေသော ရုံးခန်းကျယ်ကြီးထဲတွင် တဒေါက်ဒေါက်နှင့် အသံမှန်မှန်ထွက်အောင် ဖန်တီးလိုက်သူကား တခြားမဟုတ်။ ဘော့စ်ဖြစ်သူ ဦးမိုးလုံးဟိန်း၏ မိန်းမ ဒေါ်နန်းယမုံ လမ်းလျှောက်လာရာမှ စီးထားသည့် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်၏ အသံသာ ဖြစ်သည်။ ဇွဲတစ်ယောက် အသက်ရှူရန် မေ့လျောသွားစေသည့် အကြောင်းကား ဒေါ်နန်းယမုံ၏ အပြင်အဆင်ကြောင့်ဟု ရှင်းပြရလိမ့်မည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ လှသည်၊ ချောသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကား ယောက်ျား၊မိန်းမ အယောက်တစ်ရာတွင်၊ တစ်ရာလုံး ထောက်ခံကြမည်သာ။ သို့အတွက်ကြောင့် အထူးရှင်းပြနေရန် လိုလိမ့်မည် မထင်ပါ။
ဒေါ်နန်းယမုံသည် မြင်ရုံနှင့် ဈေးကြီးပေးဝယ်ရလိမ့်မည်ဟု သိသာသော ဘော်ငွေရောင် Halter Dress ကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဝတ်စုံ၏ အရှည်က ဒူးအထိတောင် မရောက်သဖြင့် အပြစ်အနာဆာကင်းကာ ဖြောင့်စင်းသွယ်တန်းနေသော ပေါင်တန်များကို မြင်နေရသည်။ အပေါ်ဘက်တွင်မူ လည်တိုင်ကျော့ကျော့အား သိုင်းပတ်ထားသော အစနှစ်စနေရာမှ လွဲ၍ ကျန်သည့်နေရာများက အကာအကွယ်မဲ့နေရာ ကျော့ရှင်းသော ပုခုံးသားဝင်းဝင်းလေးနှင့်အတူ၊ မို့မောက်ပြည့်ဖြိုးသော ရင်သားတွေ၏ အနေအထားကို အဝေးကပင် သိသာစွာ တွေ့နေရသည်။ ရုံးခန်းထဲတွင် မီးတွေ ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်သည့်တိုင် ဒေါ်နန်းယမုံ လမ်းလျှောက်လာတိုင်း ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင် လင်းခနဲ ဖြစ်သွားသလို ဇွဲ၏ မျက်လုံးထဲတွင် ခံစားမြင်ယောင်နေသည်။ Spoiler
“ရှင့် ဘော့စ် ရှိနေလား”
အနားရောက်လာသည့် ဒေါ်နန်းယမုံက ရုံးအတွင်း မျက်စိဝေ့ကာ ကစားလိုက်ပြီး သူ့ကို ချိုသာစွာပင် မေးလိုက်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံ၏ ပုံစံ အေးအေးဆေးဆေးနှင့် ရှိနေသော်လည်း ဇွဲကမူ ဘော့စ်ပြောခဲ့သည့် အကြောင်းအရာတွေ ခေါင်းထဲရောက်လာသည်မို့ စိတ်ထဲမသက်မသာ ဖြစ်မိသည်။ မလုံမလဲနှင့် ထိုင်နေရာမှ
“မ .. မရှိဘူး .. ဆရာမ .. ဘော့စ် ဂေါ့ဖ်သွားရိုက်မယ်လို့ ပြောသွားတယ်”
ဒေါ်နန်းယမုံ၏ အကြည့်က စွန်ရဲတစ်ကောင်နှယ် သူ့မျက်ဝန်းတွေပေါ် ကျလာသဖြင့် ဇွဲ မျက်လွှာကို အမြန်ချလိုက်ရသည်။ စားပွဲပေါ်ရှိ စာရင်းစာရွက်တစ်ချို့ကို ဘာရယ်မဟုတ် ညီသွားအောင် ပြန်စီနေလိုက်သည်။
“အင်း .. ကောင်းပြီလေ .. ဒါဆို ရှင်နဲ့ ကျမပြောစရာ ရှိတယ် .. ကျမနောက်က လိုက်ခဲ့”
ဇွဲတစ်ယောက် တံတွေးတစ်ချက်မျိုချပြီး ရှေ့ကလျှောက်သွားသည့် ဒေါ်နန်းယမုံနောက်မှ ကပ်ကာ လိုက်လာခဲ့သည်။ ဟန်ချက်ညီညီနှင့် လျှောက်သွားသော ဒေါ်နန်းယမုံ၏ လက်ထဲတွင် အဆောင်အယောင်များအဖြစ် Prada အိတ်အကောင်းစားနှင့် Mercedes တံဆိပ်ပါ ကားသော့ကို ကိုင်ဆွဲထားသည်။ သို့သော် ဇွဲ ထိုအရာတွေကို စိတ်မဝင်စားပါ။ သူ စိတ်ဝင်စားနေသည်က ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှ စွင့်ကားလုံးထွက်နေသော တင်သားများကို။ ဘာပင်တီကြိုးအရာမှ မတွေ့ရသဖြင့် ဒေါ်နန်းယမုံ အောက်ခံများ ဝတ်ထားရဲ့လားလို့ စိတ်ထဲကနေ အဖြေရှာနေမိသည်။ ဒါမှမဟုတ် ဂျီစထရင်းများ ဝတ်ထားတာလား။ ဖြူဖွေးလုံးဝန်းနေမည့် ဖင်သားကြီးများကြားတွင် ကြိုးတစ်ချောင်း ဂျီစထရင်းနှင့်ဆိုသော် ..
“ဗျာ … ဆရာမ”
ညို့ငင်ကာ အခေါ်ခံရသည့်နှယ် လိုက်ပါလာသည့် ဇွဲ .. ဒေါ်နန်းယမုံထံမှ ခပ်တင်းတင်း ခေါ်သံကြောင့် အိပ်မက်က လန့်နိုးသူလို ပျာပျာသလဲ ထူးမိသည်။ ဒေါ်နန်းယမုံက ဘော့စ်၏ ရုံးခန်းထဲက အလုပ်စားပွဲကြီးဆီသို့ ဦးတည်ကာ လျှောက်သွားနေသည်။
“တံခါး ပိတ်လိုက်ဦး ပြောနေတာ မကြားဘူးလား .. ဇွဲ”
“အော် .. ဟုတ်ကဲ့”
ဘာခိုင်းလိုက်သည်ကို သိလိုက်သည်မို့ ဇွဲတစ်ယောက် ဖြတ်ကျော်လာခဲ့သည့် ရုံးခန်းတံခါးကို အလျင်အမြန် သွားပိတ်သည်။ အပြင်ဘက်သို့ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော မှန်ချပ်ကြီးအား ကာရံထားသော လိုက်ကာလိပ်က မနေ့ကတင် ချထားသဖြင့် အလုံပိတ်ရုံးခန်းထဲမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲသာ ရှိနေသည်ကို မည်သူမှ သိနိုင်မှာမဟုတ်။ ဇွဲတစ်ယောက် လည်ချောင်းထဲ တက်လာသည့် တံတွေးကို မသိမသာ မျိုချပြီး အခန်းဘက် မျက်နှာပြန်မူလိုက်သည်တွင် ဒေါ်နန်းယမုံက စားပွဲနောက်ရှိ ဆုံလည်ခုံတွင် မထိုင်ဘဲ ရှေ့ဘက်စားပွဲစွန်းတွင် တင်ပခွေလွှဲ ဝင်ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူမလက်ထဲတွင်တော့ A4 အရွယ် ရှိမည့် စက္ကူအိတ်အညိုတစ်လုံးကို ထုတ်၍ ကိုင်ထားသည်။
“ဇွဲ .. ဒီကို လာဦး .. မင်းကို အရမ်းဆိုးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ပြစရာရှိတယ်”
ဦးမိုးလုံးဟိန်းပြောထားသည့် ကိစ္စတော့ ဖြစ်တော့မည်ဆိုတာ ဇွဲသိလိုက်သည်။ သို့သော် သူ့စိတ်ထဲတွင် ထူးဆန်းစွာ ရင်ခုန်သံမမှန်သလို ခံစားနေရသည်။ ဘော့စ်ဖြစ်သူအတွက် လိမ်ညာထွက်ဆိုဖို့ မဟုတ်ဘဲ ဒေါ်နန်းယမုံနှင့် နှစ်ယောက်ထဲရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ကို တွေးမိလိုက်တော့ စားပွဲစွန်းမှာ ထိုင်နေသဖြင့် တွဲလွဲကျနေသော ခြေတန်လှလှလေးတွေအား မကြည့်မိအောင် သတိထားနေရသည်။ ဒါတောင်မှ ရွှေရောင်တောက်နေသော ကြိုးသိုင်းဖိနပ်လှလှလေး ထိပ်ပိုင်းမှ ထိုးထွက်နေသော ခြေချောင်းလေးတွေသည် ချစ်စရာကောင်းအောင် အလှပုံဖော်ထားသည်ကို သတိပြုမိသေးသည်။
“ရော့ .. စိတ်ကို ခိုင်ခိုင်ထားပြီး .. အဲဒီမှာ ကြည့်ကြည့် ..”
ဒေါ်နန်းယမုံက သူမလက်ထဲ ကိုင်ထားသော စက္ကူအိတ်ရှည်ထဲမှ ဓါတ်ပုံတစ်ခုကို ထုတ်ပြီး ငုံ့ကာ လှမ်းပေးသည်။ လက်ဖြန့်ကာ လှမ်းယူလိုက်သော ဇွဲ မျက်လုံးတွေက ဓါတ်ပုံပေါ်မှာ ရှိမနေပါ။ ကိုယ်ကိုကိုင်းလိုက်မှုကြောင့် ရင်ဘတ်နေရာမှ အကျ င်္ီစကွာသွားသဖြင့် မောက်ကြွနေသည့် ဒေါ်နန်းယမုံ၏ အရှေ့ပိုင်းကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မိသွားသည်။ တစွန်းတစမြင်နေရသော ဆက်ဆီဘရာဖြူဖြူလေးထဲမှ ဖောင်းထွက်နေသည့် နို့လုံးတွေက ဖြူဖွေးဥနုနေသည်။
မနည်းကို အရှိန်လွန်နေသော မျက်လုံးများအား ဘရိတ်ဖမ်းကာ အုပ်ရင်း လက်ထဲရောက်လာသည့် ဓါတ်ပုံကိုကြည့်မိသည်။ ဦးမိုးလုံးဟိန်း ပြောထားသည့်အတိုင်းပင်။ ချောချောငယ်နှင့် ဦးမိုးလုံးဟိန်းက သူမအတွက် ဝယ်ထားပေးသော ကွန်ဒို၏ ရှေ့မျက်နှာစာ ခြံဝင်းတွင် တူယှဉ်တွဲကာ လျှောက်လာသည့် ပုံဖြစ်သည်။ လက်ချင်းတွဲထားသည်လည်းမဟုတ်၊ ခါးကိုဖက်ထားသည်လည်းမဟုတ်လို့ ဇွဲတစ်ယောက် စိတ်သက်သာရာ ရသည်။ ဒီလောက်ဆို လိမ်ပြောရဖို့ သိပ်မဆိုး။ မျက်နှာက အံ့အားသင့်သည့်ပုံကို ဖန်တီးလိုက်ပြီး ဒေါ်နန်းယမုံကို မော့ကြည့်သည်။ ဒေါ်နန်းယမုံက သူ့မျက်နှာကို အကဲခတ်သလို ငုံ့ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။
“ဒါ .. ဒါက ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ”
“အင်း … တို